ကန ဦး ခရီး - Afrikhepri ရံပုံငွေ
I လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကိုပြောရန်အကြောင်းရှိသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြောင့်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကုန်သွားပြီးအမြဲတမ်းလွတ်မြောက်သွားသော ၀ ိညာဉ်တစ် ဦး အကြားဖမ်းဆီးရမိသောအဖြစ်အပျက်၏ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
ဒါဟာအားလုံးအဆင်းလှသောနွေရာသီညဉ့်ကား, ငါ့အသက်ကိုရန်ရည်မှန်းချက်ပေးရငါသည်ငါ့အိပ်ခန်းထဲမှာခဲ့နဲ့ကျွန်မလမျးစစည်ပင်စတင်ခဲ့သည်။ ကူးငါ့ဦးခေါင်းသည်နောက်ကွယ်တွင်လက်နက်နှင့်ခြေထောက်, ငါသည်အဘယ်မှာရှိဝမ်းမြောက်သောစိတ်ယောက်ျားအခမဲ့နှင့်တန်းတူဖြစ်ပါ့အဘယ်မှာရှိတစ်ဦး phantasmagorical အသက်, မုန်းတီးမှုနှင့်ငြူစူသောစိတ်ဆုံးရှုံးတာ, အကြမ်းဖက်မှုမပါဘဲငြိမ်းချမ်းစွာကမ္ဘာကြီးအကြောင်းကိုအိပ်မက်မဟုတ်သလိုကွောကျရှံ့ခွငျးခဲ့, ငါ့အဆင်ပြေအိပ်ရာပေါ်မှာ, ငါ့ကျောဘက်မှာလဲလျောင်း တတျနိုငျသနှင့်သဟဇာတနန်းစံ။
ငါသည်ငါ၏ဦးခေါင်း၌တည်ဆောက်အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်းဒါက utopian ကမ္ဘာကြီး, ငါ့မျှော်လင့်ချက်၏အသီးကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်, ထိုသို့သောပရဒိသု၏ပျော်မွေ့ပျော်မွေ့ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အဘို့အဘယ်သို့ရည်ရွယ်ချက်ပြုကြသနည်း အမျိုးသားများအတွက်သာပျင်းရိခြင်းအပျြောအပါး ယူ. လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်တိုင်ကြားမှကြိုက်တယ်။ '' em ကယ်ဖို့ Providence ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တွင်သူတို့ကသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့ကံကျော်အျောဟစျ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်မအသက်တာ၏ Que la ပေါ်ဖြစ်ပေါ်ငါ့အဘို့ကောင်းမွန်သော Be မလားစဉ်းစားခြင်းဖြင့်အကြွင်းအကျန် passive ရန်ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ ငါရိုးရိုးလေးငါ့အသက်ကိုရန်အဓိပ္ပာယ်ကိုပေးခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်ငါစဉ်းစားရပ်တန့်နှင့်သရုပ်ဆောင်စတင်ရန်ကုမ္ပဏီကဆုံးဖြတ်ချက်ယူခဲ့ပါတယ်။ အိပ်ရာထဲကခုန်, ငါနှစ်ဦးစလုံးခြေထောက်ပေါ်ရပ်နေ, အရာဘေး၏ညာဘက်အပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ထို့နောက်ငါဆောင်ရွက်ရန်လို၏ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်နှင့်အတူ, ငါနှင့်အတူချိန်းခဲ့ဘယ်မှာရှိရေချိုးခန်းဆီသို့အခွင့်အာဏာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များနှင့်အတူသွားလာ။ အဖြစ်မကြာမီငါအခန်းထဲဝင်ကြ၏သကဲ့သို့ငါလက်ျာဘက်တောက်ပအုပ်ကြွပ်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ကျယ်ပြန့်မှန်ရှေ့တွင်ရပ်နေ၏။
ပထမ၊ ငါပွတ်ဖန်ပေါ်တွင်မျက်နှာ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည်ငါမှန်၌မိမိကိုယ်ကိုကြည့်ရှုတိုင်းတစ်ချိန်ကမြင်ဖူးခဲ့သည့်အတိုင်းနှင့်တူညီပြီးခြားနားချက်နှင့်အတူ, ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ငါမှောင်မိုက်အရိပ်အောက်မှာ ငါ့မျက်စိနှင့် disheveled ဆံပင်။ ကျွန်တော့်ပုံကိုမှန်ထဲမှာကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီလိုမေးခဲ့တယ် -“ ဒီမျက်နှာကဘာကိုကိုယ်စားပြုသလဲ။ "ဒီနှစ်ဆရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ။ "
ဤရောင်ပြန်ဟပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်မဟုတ်သောအခြားသူတစ် ဦး ၏အတိုင်းအတာအထိအမှန်တကယ်ကျွန်ုပ်မဟုတ်သော I ကိုပုံဆောင်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒဏ္myာရီပုံသဏ္mirrorာန်အားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကြည့်သောအခါကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိမှုတွင်သူတစ်ပါး၏ကြည့်ရှုပုံ၏အရေးပါမှုကိုသတိပြုမိလာသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်လူသားဝါဒ၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောထောင့်ကျောက်တုံးကိုကိုယ်စားပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါတည်ရှိသည့်အခြားတ ဦး တည်းအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ရုတ်တရက်ကြိုကြားကြိုကြားတောက်ငါ၏အကြံအစည်ရေလွှမ်းတဲ့အခါမှာကိုယ့်များကိုနားလည်ဘယ်သို့သောအားဖြင့်စိတ်သက်သာရာငါကြေးမုံထံမှလွှဲ။ ကိုယ့်ငါကျန်ရစ်အဖြစ် Grail ၏သိမျးပိုကျဘို့တစ်လှေပေါ်တွင်တစ်ဦးတည်း, လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကြောက်စရာအလေးပေး, ဒီဂြိုလ်သားတစ်ဦးထွက်ပေါက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
ငါ၏အခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာထဲမှာတချို့ကအဝတ်နဲ့ပေါက်, ငါသည်မကြာမီစိတ်ခံစားမှုအများကြီးယူဆောင်လာပေးနိုင်မလားဒါကတစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စွန့်စားမှုရှာဖွေနေ, သမုဒ္ဒရာပေါ်သွားလာခဲ့။
Chapter2: အဆိုပါ Quest
ငါအများကြီးမျှော်လင့်ချက်နှင့် Sami အဘိဓါန်နာရီမှာတစ်ခုချင်းစီကိုနေ့ခြင်းမရှိဘဲ, ငါ-ခဲ့ပြီးခဲ့သည့်နေ့၏အဆုံးအထိ, ငါ့ကိုနှစ်သိမ့်ဖို့နေရောင် qui cam နေဖြင့်သွားရောက်ခဲ့ပြီး, ကွာမျော, သမုဒ္ဒရာပေါ်နီးပါးနှစ်လပင်လယ်ကူးခဲ့သညျ။
ငါ့အခန်းများ၏ဆိပ်ကမ်း-အပေါက်ထဲကနေငါညဉျ့အခြိနျ၌သေးငယ်တဲ့ခရီးသွားလူထုကိုတိမ် fire- ၏အက္ခရာ constellations- ထင်ဟပ်ဘယ်မှာကြက်၏တိတ်ဆိတ်နက်နဲသောပင်လယ်စဉ်, လသမုဒ္ဒရာ၏အပြာဧရိယာအပေါ်ကိုအဆငျ့မွငျ့နဲ့ကျွန်မချက်ကိုကျွန်တော်လေးစားမိတယ်ကြည့်ရှုနိုင် အဆိုပါအဆုံးမဲ့၏နက်နဲသောအရာ။ ငါတောင်းဆိုသည့်မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း၏ bewitching သီချင်းဆိုခြင်းဖြင့်ဆွဲဆောင်, အမည်မသိလိုရာခရီးဆီသို့ရွက်လွှ, တစ်နှစ်ကျယ်ပြန့်အပြာရောင်သမုဒ္ဒရာကလာသောလေရှေ့မှာငါ့ကိုကျော်လှိမ့ယူထိန်းချုပ်မှုများရောင်ကြကုန်အံ့။
ဘယ်ကိုသွားရမှန်းမသိတော့၊ ငါဟာမုန်တိုင်းတိုက်ချင်တဲ့လှိုင်းလုံးကြီးလိုမျောနေခဲ့တယ်။ ငါဟာwavesရာမလှိုင်းလုံးကြီးတွေကြောင့်ချာ့ချ်တက်လာတယ်၊ ငါ့ကိုမျှော်လင့်ချက်ဆီသို့ ဦး တည်သွားစေသကဲ့သို့လျင်မြန်စွာငါ့ကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။ ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေကကောက်ရိုးပုံထဲကအပ်ကိုရှာဖွေဖို့အထင်ကြီးစေခဲ့ရင်တောင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။ သိသာထင်ရှားသည့်အောင်မြင်မှုမရရှိသည့်လများကြာပြီးနောက်သူ၏သင်္ဘောပေါ်တွင်ဘုရားဖူးတစ် ဦး အဖြစ်မျောပါနေဆဲ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်သံသယ ၀ င်ပြီး၊ ဤလောကကိုမြင်တွေ့နေရသော်လည်းရှာဖွေရန်ခက်ခဲလွန်းသောဤအရာအားမြင်နိုင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေများနှင့်အခွင့်အလမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ မျှော်လင့်ချက်ပျောက်ဆုံးသွားသည်။ ဒါကြောင့်ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုအသုံးပြုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ “ အချစ်ဆိုတာမင်းဘယ်မှာလဲ။ အချစ်ကကိုယ့်ကိုပြပါ။
ရည်ရွယ်ချက်ငါငါ့စကားသံများ၏ပဲ့တင်သံတစ်ထိကပြန်တူသောငါ့ထံသို့ ပြန်. အဖြစ်တော၌ဟောပြောဖို့ခံစားချက်ခဲ့။ အကြှနျုပျဒူးပျေါမှာလဲငါကကူညီပေးဖို့ဘုရားသခငျတောင်းဆိုနေ, မိုဃ်းကောင်းကင်ဆီသို့ဦးတည်ငါ့လက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏။ သာမိုဃ်းတိမ် ouvert နှင့်မီးခိုးတစ်မိုဃ်းတိမ်၌ရှိခဲ့လျှင်ဤလှူဒါန်းသူ, ဒီမှောင်မိုက်ရှာဖွေရေးအတွက်အလင်းကိုရောက်စေဖို့တစ်ခုတည်းသောယုံကြည်စိတ်ချရသောတဦးတည်းကဆင်းလာခဲ့ရသည်။ အဖြစ်မှန်မှာတော့ကျွန်မမေတ္တာကိုတောင်မှခဲ့သောအရာကိုမသိခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးအရာခဲ့သလား ဒါကြောင့်အဖြူဖြစ်ခြင်း၏တစ်ပြည်နယ်ခဲ့သလား ဒါကြောင့်တစ်ဦးခံစားချက်ခဲ့သလား ငါဒီမေတ္တာကိုပေါ်နဲ့ကျွန်မလုံးဝရှာဖွေခဲ့မူတည်ကြောင်းဆိုတာသူသိအားလုံး။ ရည်ရွယ်ချက်မည်သို့ငါမသိခဲ့ပါတစ်ခုခုရှာနိုင်မလား
ငါက၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုအပေါ်နည်းနည်းလေးစိတ်ကူးခဲ့ပေမယ့်အပြီးသတ်သောဘာမျှ။ “ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်း၊ ကြင်နာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်၊ အရာရာကိုတောင်းဆိုသည်၊ အရာရာတိုင်းကိုယုံကြည်သည်၊ အရာရာတိုင်းကိုမျှော်လင့်သည်၊ ဒီတစ်ခါတော့ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်ဘယ်တော့မှမသေတော့လျှင်ငါအနီးကပ်ချဉ်းကပ်ရန်အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အချစ်ဆိုတာအချိန်ကုန်ဆုံးနေတယ်ဆိုတာကိုငါရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းကငါ့ကိုမျက်ရည်ကျစေခဲ့တယ်။
ကိုယ့်မေတ္တာကိုနေရာတိုင်းလူတိုင်းအတွက်ခဲ့နဲ့ကျနော်တို့ကတွေ့ရှိရန်အဘို့အကြည့်ဖို့-ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ, မတောင်မှအဲဒါကိုရဖို့ကမေးမြန်းဖို့အဲဒီသဘောပေါက်ခဲ့, နောက်ပိုင်းကတဦးတည်းရဲ့လက်ကိုကိုင်ခြင်းနှင့်ယူမှပဲလိုအပ်သောခဲ့ဆိုလိုသည်မှာရည်ရွယ် ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုအနီးဖြစ်ခဲ့သည်။
အခန်းကြီး 3: လူသတ်မှုမုန်တိုင်း
ရောင်ပြန်ဟပ်မှု qui ၏ဤခဏစုစုပေါင်း plenitude ၌ငါ့ကိုပို့ဆောင်ပြီးနောက်ကျွန်မမြောက်လေ၏လတ်ဆတ်သောအကြှနျုပျကိုက၎င်း၏ပိုးပုဆိုးထုပ်ဘယ်မှာရှိလှပသော starlight ညကိုခံစားဖို့, ငါ့လှေ၏ကုန်းပတ်ပေါ်လေ၏။ ငါသည်ငါ့လက်မောင်းလအားဖြင့်ဖြတ်ကျော်နှင့်ငါ၏ရှေ့အိပ်ရာ, မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအစေးမှောင်မိုက်စကင်ဖတ်ဖို့ရှိ၏။ လှေ၏ပါတီအား၌ငါအမြှုပ် qui ၏ရှည်လျားသောထွန်ကြော်ငြာ infinitum ထွက်ပျံ့နှံ့ထွက်စေတော်မူ၏။ ဤသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်စာလုံးပေါင်းရုတ်တရက်လေတိုက်၏လေပြင်းတိုက်ခြင်း၏ပီပီနှငျ့ငါ့လှေannoncéပြင်းထန်သောမုန်တိုင်း၏အံ့ဆဲဆဲ၏ကိုယ်ထည်ဆန့်ကျင်လှိုင်းတံပိုး၏လေယာဉ်ပျက်ကျမှုအတွက် qui မငြိမ်မသက်ဖြင့်အစားထိုးခဲ့သည်။
ဆိုတော့မြန်လေတိုက်နှုန်းများ၏ဖိအားကိုတှနျးလှနျဖို့မအောင်မြင်ဘူး, အရွက်ပုဆိုးဖောင်းများနှင့်သူတို့ကရွက်တိုင်၏ဆွဲထားထံမှရက်စက်စွာလြှော့ဒါကဒါကြောင့်ဤမျှလောက်တင်းသွားသည်။ ငါ anemometer ၏ဆေးထိုးအပ်စိုးရိမ်မခဲ့ဒါကဒိုင်ခွက်ညွှန်ကြားချက်အပျေါမှာငါ့အခန်းအတွင်းပိုင်းမှ sneakily ပြန်လာ၏။ ငါတက်မကူကယ်ရာမဲ့ငါ၏အအားထုတ်မှုခဲ့ငါနားလည်သဘောပေါက်ညာဘက်, ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူပြိုင်ပွဲကိုစောင့်ရှောက်ရန်အလို့ငှာခိုင်မြဲစွာ welded ထိန်းသိမ်းပါဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါဟာခေါင်းဆောင်မှုထိန်းသိမ်းပါရန်ကြိုးစားရန်အချိန်တစ်စွန့်ပစ်ရတယ်: အားလုံးလမ်းညွန်ထဲမှာတလည်လည်လှေ, နထောင်လွှားသောသမုဒ္ဒရာအားဖြင့်ထိခိုက်။ တစ်ခါတစ်ရံသဘာဝ icts အာဏာကိုကြှနျမတို့နှင့်လူသားတို့၏မှ pitiless ဖြစ်လာသည်။
သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ကြောက်စိတ်ကင်းမဲ့သောစူးစမ်းရှာဖွေသူအားစိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောပင်လယ်တစ်ခု၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပိုက်ကိုထွန်းလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ထုပ်ကိုဖြောင့်လိုက်တယ်။
ခဲငါလေတိုက်တဲ့လေပြင်းတိုက်ခြင်း, ငါ့မျက်မှန်ပေါက်ကွဲခဲ့ဒါကထိုသို့သောအကြမ်းဖက်တွေနဲ့ငါ့မျက်နှာကိုရိုက်ဒါကပြင်ပငါ့နှာခေါင်း၏အဆုံးနိုင်ဘူး။ ငါ em သူတို့ဟာပြီးသားသမုဒ္ဒရာ၏ meanders အတွက်ယခုအချိန်အထိပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ရည်ရွယ်ထားဖမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါ၏အပိုက်နှင့်ငါ့ဦးထုပ်ကိုကိုင်ပြီးငါပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဒါသိသာခဲ့ကတည်းကဦးခေါင်း, ဒါဟာ fix မှဖွယ်ရှိနေသည်, အရှကျင်းပဘယ်မှာရှိရွက်တိုင် qui ဆီသို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကျိုးပဲ့ပျက်စီးခဲ့အောင်မြင်မှုမရှိဘဲရည်မှန်းချက်လျှော့ချ, တိုးတက်။ ငါစာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းစာတမ်းထိနျးခြုပျလှိုင်းတံပိုး contre ခက်ခဲလှနျခဲ့နှင့်လေတိုက်နှုန်း qui ၏အကြမ်းဖက်လေပြင်းတိုက်ခြင်း, ငါ့လှေများ၏ windward ခြမ်းလုပ်ကြံလေ၏။ အရမ်းလျင်မြန်စွာ, စစ်တိုက်ရာတွင်, qui ချထားခဲ့အစွမ်းထက်လေဆင်နှာမောင်းနေဖြင့် ICT လက်နက်တိုက်၏စုစုပေါင်းကျြောလှားခဲ့သည်။
အရာအားလုံးဒီတော့အစာရှောင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ရေနှင့်ဆူဝပြီမိုဃ်းတိမ်တို့ကိုပထမဦးဆုံးရုတ်တရက်မုန်တိုင်းပြင်းစွာတိုက်ခဲ့ပြီးထို့နောက်တစ်တွေများကောင်းကင်၌စုဝေးခဲ့ကြသည်။ မိုဃ်းကြိုး Clasp နောက်တွင်အလင်းရောင်၏လျှပ်စစ် flash ကိုအားလုံးအပေါ်မိုဃ်းတိမ် streaked ဖူးနှင့်တကွမိုဃ်းရွာလှေပေါ်ကဆင်းပြိုလဲခဲ့လောင်းခဲ့သည်။
သမုဒ္ဒရာ၏တက်ခြင်း qui ချထားအလွန်ကြီးမားသောလှိုင်းတံပိုးပြပ်ဝပ်နှင့်စာသားလှိုင်းတံပိုးကိုငါ့မျက်နှာပေါ်ပေါက်ကွဲဖန်ဆင်းမှငါ့လှေများ၏ကိုယ်ထည်နှင့်အ undertow qui အပေါ်ခှဲခွားထားသောရလဒ်လွှတ်။ တစ်ဦးမဆင်မခြင်ပင်လယ်၏ရိုင်းရေကြီးမှုအပေါ်အကြောင်းကိုပစ်လွှတ်လိုက်တယ်, တည်, ငါ့လှေမလွှဲမရှောင်မုန်တိုင်း၏မျက်စိဆီသို့ဦးတည် Reviews ခဲ့။
ငါသည်ငါ့လှေထဲသို့တပ်များနှင့် icts ရေလွှမ်းမိုးထဲမှာမျိုဖို့အဆင်သင့်မြင့်မားငါးခြောက်လမှမီတာကနေလှိုင်းတံပိုးကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ဒေါသထွက်နေတဲ့ပင်လယ် qui ၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့။ အနက်ရောင်အပေါက်ပိုမိုနီးကပ်စွာဤ icts infernal လိမ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ဆွဲရန်ဖြစ်ပါသည်ခြိမ်းခြောက်လာဖူးနဲ့တူလှညျ့ကွညျ့မိတဲ့ဒါကလောကဓာတ်။ မုန်တိုင်း၏မျက်စိယခုအလွန်ဝေးမဟုတ်နှင့်ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုမလွှဲမရှောင်ထင်ရှား။ , ရုတ်တရက်ကျွန်မအထဲမှာစို့နှင့်ခါးဆစ်တပေါင်းစည်းခဲ့။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တိုက်ပွဲဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ငါပင်လယ်ရေအောက်တွင် qui ထောင်ချီခွကေိုဆင်းသက်သည်ငါ့လှေနှင့်အတူပင်လယ်၏အောက်ခြေကိုဦးတည်သည်ညီမျှမှုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကျဆင်းခဲ့သည်။ ရည်ရွယ်ချက်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သလဲ
အခန်းကြီး 4: ကျနော်တို့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကျွန်း
ငါ multi-အရောင် Ophidians ၏ frenetic ဘဲလေးအကြှနျုပျ၏အာရုံကိုယစ်ဘယ်မှာရှိကျောက်ဆောင် entre ဖမ်းမိငယ်များပြားလှသောတိရိစ္ဆာန်များကိုကြည့်, အမည်မသိကမ်းခြေ၏စိုစွတ်သောသဲပေါ်မှာလဲလျောင်းခဲ့။
လှိုင်းတံပိုးကိုဖဲ့နှင့်ငါ့ scaly ခြေလက်အင်္ဂါအနီးရွှေ့ခဲ့၏တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် Swift နှင့်အတူလက်ဆောင်အဖြစ်အမြှုပ်များနှင့်အလွန်သေးငယ်သောဏန်းတွေနဲ့အကြှနျုပျ၏ခွကေိုဖုံးလွှမ်းနေစဉ်ထိုအခါငါရှိကျန်ရစ်သည် azure ကောင်းကင်ပြာတွေရဲ့ရန်အတွက် qui အပေါ်ရေနီးပါး limpid လမ်းပိုင်း gleamed ။ အားလုံးငါ့ကိုလှည့်ပတ်, ငါသည် qui အဆိုပါကြက်သရေကမ်းခြေ၏ခေထြားသဲအလှဆင်စတိရိစ္ဆာန်များတစ်သင်္ချိုင်းသတိပြုမိသည်။ ငါသူတို့ကအလွန်လျင်မြန်စွာကြနဲ့ကျွန်မအသားအရေအပူလောင်ခြင်းနှင့်ချေးထံမှခံရချင်ကြဘူးလျှင်ငါသူတို့ရဲ့ထိတွေ့ရှောငျ shoulds ဒါက jellyfishes နားလည်။
အတန်ငယ်အဲဒီအစားဒီနေကြလို့ပဲပတ်ဝန်းကျင်အားဖြင့်ကြောက်ကျွန်မအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းတတ်နိုင်သမျှဤအရပ်ဌာနကိုစွန့်ခွာဖို့ပညာရှိဆုံးဖြတ်ချက်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုဦးတည်ရာရှိသနည်း ငါမဆိုစိတ်ကူး-ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ကျွန်မခဲ့ဘယ်မှာအဆုံး၌, ငါတောင်မှသိပါခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်အရာကိုကွာမဆိုလူ့ယဉ်ကျေးမှုထဲကနေအမည်မသိအရပ်ဌာန၌မထောက်ခံကြောင်းဝက်ဝံမပါဘဲတစ်ယောက်တည်းဖြစ်ဖို့ထက်ပိုပြီးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်မလား တဖြည်းဖြည်းကျနော်အကဲဖြတ်-ငါ့အဖို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအလို့ငှာ၌ငါ့ဖျံထိ, သဲပေါ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန့်။ အံ့သြစရာကောင်းတာကကျွန်မကျိုးဘာမျှခဲ့။ ငါ၏အခြေလက်အင်္ဂါမယ့်ခိုင်မာသောနှင့်တစ်နည်းနည်းအနာခဲ့ကြသည်။ ယင်းကိုမည်သို့ဖြစ်နိုင်သမျှပြီးနောက်-ထိုသို့သောသင်္ဘောပျက်, ရခဲ့သလဲ အကြိမ်အနည်းငယ်ပြီးနောက်ငါထရပ်ခဲ့ Walking ။
ငါ qui ရေထဲမှာတစ်ခုအိုအေစစ်၏ search အတွက်ခဲ့ခန်းခြောက်မဟုတ်ဘူးမလား, ဒီကန္တာရထဲမှာရှိချုံနွယ်ပိတ်၏သေးငယ်တဲ့ကျွန်း၏နောက်ပိုင်း-ဒီရက်ကက်ငြိမ်သက်ခြင်း၏အဆိပ်၏, ထိုအပူလှိုင်းအောက်မှာလမ်းလျှောက်, ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးနှင့်ငါ့နှုတ်ခမ်းခြောက်သွေ့တဲ့နဲ့အတူရွှဲ ကျွန်မအနေနဲ့မပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများမိုးကုပ်စက်ဝိုင်း peered နှင့်ကိုမြင်တော်မူ၏။ အဆိုပါ ergs ကမ်းခြေနှင့်ဝမ်းနည်းမှုတစ်ခုသမုဒ္ဒရာကိုချွတ်လှိုင်းတံပိုးတူ။ ငါရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့်လေတိုက်အင်အားစုကတွန်းအားပေးလေတိုက် Vane ကဲ့သို့ပူမိုးနည်းရေရှားပြီးခြောက်သွေ့လေတိုက်နှုန်းအားဖြင့်ခုခံခြင်းမရှိဘဲသိမ်းသွားခဲ့။ အဆိုပါသဲကန္တာရ qui နေရောင်၏ရောင်ခြည် gleamed နှင့်ထင်ဟပ်မျိုးစုံရှုထောငျ့နဲ့စိန်မိုင်းနဲ့တူတယ်။ အလှတရား၏ဤ scintillating ဧရိယာအထက်သည်နေရောင်ခြည် disc ကိုတစ်ဦး Pierce တစ်ချက်အောက်တွင်အရာရာကိုအတူစောင့်ကြည့်။
မျက်မှောက်ငါ၏အညီ, ငါသည်ငါ့မျက်မှောက်၌သိသိသာသာချို့ယွင်းသဲ qui ၏လောကဓာတ်မှတဆင့်တစ်ဦးပုံကိုတွေ့မြင်နိုင် ... ငါသည်ဤဦးတည်ချက်အတွက်သွားလာ၏။ ငါ၏အတိုးတက်မှုမှာအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ငါ့ကိုဒဏ်ခတ်ဖို့လေတိုက် cam ၏လေပြင်းတိုက်ခြင်းနှင့်ငါထည်တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းနှင့်အတူငါ့ဦးခေါင်းဖုံးအုပ်ခြင်းဖြင့်ငါ့မျက်နှာကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ရှိပါတယ်။ ပြိုးပြိုးပြက်ပြက်နဲ့မကျြစိကှနှစ်ဦးစလုံးငါငါသည်ကိုယ်အရေ hit qui သည့်အလွန်သေးငယ်သောသဲအစေ့၏သက်ရောက်မှုကြောင့်နာကျင်မှုခံစား, လေ၏ဘယ်မှာ Precision သိမှတ်ကြလော့မပါဘဲယူသွားတတ်၏။ အဆိုပါပူနွေးအပူဒီကမ်းခြေပေါ်ခဲ့နှင့်ငါ၏ကုတျ acorn ကနေချွေးအကြှနျုပျ၏ tanned အသားအရေပေါ်မှာတခါအငွေ့ပျံဖို့။ ငါ dehydrating ခဲ့ငါမဆိုရေ-ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါ, ငါ၏ GUTS သို့ငါ၏အရှင်သန်မှုအတွက်လိုအပ်သောစွမ်းအင်ကျဆင်းခဲ့။
ရုတ်တရက်ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မအနေနဲ့ inchoate အတွင်းမှာပဲ qui မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုလယ်ပြင်၌အကြှနျုပျကို propelled ငါ့ကိုလမ်းလျှောက်အပေါ်သယ်ဆောင်ဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုပေးတျောမူပါမညျခံစားရတယ်။ ထိုအခါငါအရောင်များလှိမ့ထမ်းတစ်ဦးလှေကဲ့သို့တောင်ပို့ချလိမ့်တက်။ ငါ၏အစုတ်ငါ့အဆင်းရဲသားကိုအခွအေနအဘို့အသက်သေခံနိုင်နဲ့ကျွန်မမီးလောသဲပေါ်မှာအခြားတဦးတည်းခြေလျင်ပြီးနောက်မိတ်ဖက်, ဆာဟာရ၏ခုံကိုဖြတ်ကူးနေတဲ့ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်နဲ့တူအနည်းငယ်နိုင်။ ကျွန်မသတိလစ်, မြေနှိပ်, အကြှနျုပျ၏မကျြနှာကိုကျဆင်းအဖြစ်ဆွစ်ဖ်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိကိုငါလဲနှင့်ဝိညာဏ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
တစ်ဦးကတခဏအကြာမှာကျွန်မတဖြည်းဖြည်းငါ့မျက်စိ ouvert ။ အကြှနျုပျ၏ရူပါရုံကိုမြူဆိုင်းလျက်ရှိသောခဲ့။ ကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်မျက်စိကိုပွတ်နဲ့ကျွန်မမောအဝါရောင်လိုင်းမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားမြင်ငါ့နှလုံး Melancholie နှင့်လွမ်းဆွတ်မှုများရေလွှမ်းမိုးသဖြင့်လွှမ်းခဲ့။
ထိုကဲ့သို့သောလှပသောမြင်ကွင်းကိုနေဖြင့်ပြောင်းရွေ့, ငါ၏မျက်ရည်ငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုသရုပ်ပြငါ့ပါးဆင်းပြေး၏။ အသက်ရှူငါမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာသစ်တောနဲ့တူလှညျ့ကွညျ့မိတဲ့အဘယ်အရာဆီသို့တွားမှစတင်ခဲ့သည်။
ထိုသို့သောတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်၌ငါ့ကိုအဘယျသို့ဖြစ်ပျက်နိုင်မလား ကျွန်းလူနေထူထပ်ခဲ့သလဲ အတော်များများကကိစ္စများ qui ငါမှတက်မထူးပိုပြီးနက်ရှိုင်းစွာထိုးဖောက်ဖို့သစ်တောများ၏အစွန်းအတိတ်လေ၏ရှိသည်။
အခန်းကြီး 5: ဘဝ, တောတွင်း
သိချင်စိတ်တို့ကတွန်း, ငါပျောက်နညျးကိုက်ခွဲခြားနိုင်စိမ်းလန်းစိုပြေရှင်းလင်းခြင်းဆီသို့ဦးတည်ငါ့အလမ်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ထို့ကြောင့် putrefaction အတွက်သေလွန်သောသူတို့သည်အရွက်အောက်မှာဝှက်ထား woodlice နှင့်ပုရွက်ဆိတ်တွေနှင့်အတူဂါဇံဟာ damp သစ်သား qui အောက်မှာခိုလှုံနေတဲ့ parasol အဖြစ်သရုပ်ဆောင်, အလွန်ထိပ်မှာတချို့ကခြောက်ဆယ်မီတာကုမ္ပဏီကြီး Bushi သစ်ပင်များကလွှမ်းမိုး, အဲဒီအစားတစ်ဦးသိပ်သည်းသစ်တောဖြစ်ခဲ့သည်။ စာတမ်းရှည်သစ်ပင်များအခြားသစ်ပင်များနှင့်ထူသောအစိမ်းရောင်သစ်ရွက်နှင့်အတူကြံ့ခိုင်အောက်, တောသူဌေးသည်မြေကြီးပေါ်မှာဆွဲထားနွယ်နှင့်မြင်နိုင်သောအမြစ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ သစ်တောအတွင်းပိုင်းပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားနေစဉ်, ငါပုရစ်များ၏နူးညံ့သောဂီတကိုနားထောငျနိုငျပါနဲ့ငှက်တစ်ကြက်သရေဆင်ဖိုနီ Concerto qui အတွက်ထွက်သယ်ဆောင် qui ငြိမ်းချမ်းစွာညဥ့်ကြေညာဖို့သလိုပဲ။
ငါသည်မိုဃ်းကောင်းကင်ဆီသို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကြည့်, ငါညဉ့်ကိုလုံခြုံအမိုးအကာသက်သေခံရှေ့နေ C. ကိုရှာဖွေရန်ပဏာမခြေလှမ်းရရှိခဲ့ဒါငါဆည်းဆာမတိုင်မီအချိန်အများကြီး-ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်ကြီးမားတဲ့ကြောင်, ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဆိပ်အပြင်းမြွေနှင့်အခြားသားရိုင်းတိရိစ္ဆာန်များကဝိုင်းကျီး, သင်တစ်ဦးတည်းတဲ့အခါကို Safe ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲ
ငါသစ်သားမီးလုပ်နိုင်ရန်အတွက်အခက်များစုဆောင်းရန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ငါချုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းများ, တစ်နှစ်ကြီးမားမြွေထဲမှာမုသာစကားကို, သတိထားမိလာတဲ့အခါငါ့အ peregrination တစ်လျှောက်လုံးငါသာကာလဖြစ်ပါသည်အခက်များနှင့်ရှိတဲ့အကိုင်းရွေးချခဲ့။ ဒါဟာနှေးနှေးကွေးကွေး icts ထူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်းထွန်းလင်း / glistening အကြေးခွံများကရှုမြင်သုံးသပ်ကြအကျည်းတန်ဦးခေါင်း၌တက် lit icts နှင့်၎င်း၏အထွတ်အထိပ်အနီရောင်မျက်လုံးယောင်ပြီး
အလိုလိုငါ့ကိုတက်ခူးခဲ့နှင့်တွားသွားသတ္တဝါဟာအရပ်ရှည်ရှည်မြက်ထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားတုတ် qui နှင့်အတူဦးခေါင်း၌ပြင်းထန်စွာကကန်။ ငါအလုံအလောက်သစ်သားစုဝေးခဲ့ကြသည်အခါ, ငါတစ်နေရာရာမှာခြောက်သွေ့တဲ့အတွက်ထင်းနေရာငါထင်နေတဲ့အခိုက်အဆင်း crouched ။ အလွယ်ကူဆုံးအရာဖြစ်ကြောင်းအမှုကိုစီရင်ခဲ့သည်။ ယခုငါနှစ်ခုသစ်သားကြီးစွန်း၏ရှေးကသြောနည်းလမ်းနှင့်အတူမီးလင်းခဲ့။ တစ်ခုမှာမြေ၌ထားကြရသည်နှင့်အခြို့သောခွောကျသှေ့ရှိတဲ့အကိုင်းင်တစ်ဦးအလျားလိုက်အပေါက်ထဲမှာ embedded ခဲ့သည်အခြား qui supporting ။ အဆိုပါရှိတဲ့အကိုင်းကနေတစ်ဦးအနေဖြင့်အတူတကွတချို့ကမီးခိုး cam '' em ထွက်ပွတ်တိုက်ပြီးနောက်။ ထို့နောက်ငါမီးတောက်နှင့်ပထမဦးဆုံးပေါ်ထွန်းသောပထမဦးဆုံးမီးလျှံကိုနှိုးဆော်ဖို့ကပေါ်ညင်ညင်သာသာမှုတ်။
ထို့ကြောင့်ငါမှရှိမယ့်မီးပုံနှင့်အနည်းငယ်အပူထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဘိုးဘွားစာတမ်းနည်းစနစ်ကိုကျေးဇူးတင်နိုင်ခဲ့သည်။ ငါထို့နောက်ငါသည်ငါ့ဆာလောင်မွတ်သိပ်တိတ်ဆိတ်ဖို့တချို့ကအစားအသောက်များကိုရှာခြင်းငှါထညရှိအေးမြသောခဲ့သောကြောင့်အနည်းငယ်တက်နွေးလာတယ်။ ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအမျိုးမျိုးမှိုနှင့်အတူအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားမြေပြင်ခဲ့ငါ့အယခင်လမ်းလျှောက်, Que la စဉ်အတွင်းမိခဲ့။ ငါသူတို့စားသုံးဆီအပေါ်မဆိုအရိပ်အယောင်မလိုဘဲတချို့ကစီမံ FILE ။ သူတို့ကိုငါအားလုံးစားရကြ၏။
ငါမကြာမီ qui ထင်းမီးအလင်းရောင်အားဖြင့်ဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်သက်သာမရှိဘဲအကြှနျုပျကိုလှည့်ပတ်ပျံသန်းခဲ့သည့်အင်းဆက်ပိုးမွှား၏ခုန်အားဖြင့်ယစ်ခဲ့ဘယ်မှာငါ၏အလာမယ့်မီးပြန်လာ၏။
အလင်းနှင့်အတူအမှောင်ညဥ့်ဟေု။ ????? ငါလေးစားအတူတောက်ပပိုးစုန်းကြူးအလင်းရောင်-ပိုးကောင်များနှင့် qui ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်နောက်တွင် Cross-အတော်များများကမျက်စိထိုင်လျက် ကျွန်မစဉ်းစားများနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အသံ၏ဤ orchestration နားထောင်ရန်တကယ်ပဲပျော်ရွှင်ခံစားခဲ့ရသည်။ တောင်မှငါ, ဒီကြက်သရေပြပွဲမှကျေးဇူးတင်စကားခဲ့ဘယ်မှာရှိဆိုးညစ်ယုတ်မာတဲ့နေရာမေ့နေတာလားခဲ့။
သို့သော်ငါထပ်မံကြုံတွေ့ရသည်။ မြက်ခင်းများပြည့်နှက်နေသောလေထုနှင့်တောအုပ်သစ်တောပေါ်တွင်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့်လေထုပေါက်လာသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ ecstatic state မှဖယ်ထုတ်လိုက်သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်အားရေပုံးတစ်ပုံးကိုပစ်ချလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်တော်ခေါင်းမှခြေချောင်းအထိစိုစွတ်သည်။ ကျွန်တော့်ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာဖမ်းမိခဲ့တယ် ငါ့မီးလည်းပျက်သွားပြီ။ ထင်းလည်းအသုံးမရတော့ဘူး။ စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီး“ အိပ်ကြ၊ ဘာမှမကြောက်နဲ့၊ ဦး စွာနင့်တုန်လှုပ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်ပြီးတော့သင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့တစ်ခုလုံးကိုထူးဆန်းတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုကလွှမ်းမိုးသွားလိမ့်မယ်” ဟူသောအသံတိုးတိုးလေးကြားရသောအခါကျွန်ုပ်ကိုကူညီပေးပါရန်တောင်းပန်ခဲ့သည်။ တက်ရှင်းလင်းခြင်းနှင့်မိုrain်းရွာစေရပ်တန့်။ သို့သော်ကြီးမားသောအားထုတ်မှုများဖြင့်မီးထွန်းထားသည့်မီးသည်သေသွားပြီ ဖြစ်၍ ယခုငါအအေးမိသွားသည်။
ရွှံ့အိပ်ရာခဲ့လဲလျောင်းငါလ၏ရောင်စဉ်ငါ၏အကြံအစည်သရဲခြောက်တယ်လို့သစ်ပင် ebony စည်သည်အတိုင်း, အချည်းနှီးအိပ်ရန်ကြိုးစားကြိုးစား, wriggled ။ အဆိုပါမြည်၏ incongruous screeching, ထိုပုရစ်များ၏ sputtering, ထိုကြက်တူရွေးများ၏ Twitter နှင့်မျောက်များ၏ shrilling စိတ်ဝင်စားတယ်, ငါသည်အတှကျအိပျညဥ့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ငါ့နှလုံးထောင်းနဲ့ကျွန်မနေရာတိုင်းမိကျောင်းလောင်စိတ်ကူး, ငါ၏ဆံပင် ICT အဆုံးရပျတညျခဲ့သည်ဖြန်းဖြန်းထခဲ့။
အားလုံးငါ့ကိုလှည့်ပတ်သည်မှောင်မိုက်၌, မြည် qui ၏တောက်ပမျက်စိငါ့ကိုငေးကြည့်နဲ့မခြားမလပ်ပုန်ကန်ကြီးမားအနက်ရောင်ကြွက်များစွာသောလူများ၏ပြန့်ပွားခံစားရတယ်။ ဒီ Apocalyptic ဇာတ်စင်အားဖြင့်ကြောက်, ငါသညျငါ့ပါးစပ် ouvert အခါ, ငါစကားလုံးလွှင့်လို့မရပါထိတ်လန့်ရည်မှန်းချက်အတွက်ဆူညံအော်ဟစ်ချင်ခဲ့တယ်။ ထိုအခါငါပြေးချင်ခဲ့သော်လည်းငါ့ခြေလက်အင်္ဂါကိုကွောကျရှံ့ခွငျးအားဖွငျ့အောက်ပိုင်းသေခဲ့။
အကူအညီမဲ့, ငါကဝိုင်းခံရဖို့ယုံကြည်သွားတယ်မရေမတွက်နိုင်တဲ့အတွက်သရဲတစ္ဆေများနှင့်သတ္တဝါများကိုတိုက်ဖို့ထင်း၏အကိုင်းအခက်ရရှိခဲ့သော်လည်းငါ့လက်နက်တွေ '' em မရောက်ရှိနိုင်ဘူး။ ကမ္ဘာ qui ငါ est devenu agoraphobic အဖြစ်မှန်အတွက်မတည်ရှိခဲ့ပါ။ ရုတ်တရက်, ငါ့တကိုယ်လုံး qui ငါ့ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦး epileptic မထိုက်မတန်ရှိခြင်းပေါ်လာကြိုက်နှစ်သက်လုပ်ချောင်းဆိုးခြင်းဖြင့်တုန်လှုပ်ခဲ့။ အဖြစ်မကြာမီသိမ်းယူမှုစတင်အဖြစ်ပြုလုပ် est ငါ့ကိုအသက်ရှူရန်အဘို့အခက်ခဲ devenu ။ ငါညှစ်သတ်မှစတင်ခဲ့ပြီးဒါအရမ်းဒေါသထွက်သွားတယ်ငါကြောက်မက်ဘွယ်သောနာကျင်မှု၌သေဖို့အကြောင်းရှိခဲ့တူသောငါကြည့်ဒါကခဲ့။ ထို့နောက်ရုတ်တရက်အားလုံးနာကျင်မှုအဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းကြောင့်ရောက်လာသောအဖြစ်သွားကြောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုယ်ပြီးနောက်-ဤမျှလောက်လှုံ့ဆော်မှုချွေးနှင့်အတူ glistening တစ်ဦးသန္ဓေသားအနေအထားအတွက် crouched နှင့်စဉ်းစားရန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအရာဝတ္ထု qui မရဏကကျေနပ်အဖြစ် manipulate ရနိုင်ပါသလား, ဘာမှမရှိဖို့ရေးဆွဲခံရဖို့ကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားမှုနှင့်တစ်နှစ်လျှင်လူအရာဝတ္ထုဖြစ်မည်ဟု, တုံ့ပြန်ရန်အဖြူ BLE ဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲအနက်ဆုံးသောတွင်းထဲမှာမိမိကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါတကယ်အားနည်းခြင်းနှင့်အာဏာမဲ့ခံစားရတယ်။
မောကျွန်မရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်း '' အိမျတျော၌, ကျေးလက်ဒေသအတွက်, ငါ့ကလေးဘဝတစ်ဦးနာကျင်နေ့ရက်ကိုအောက်မေ့, တစ်ဦးသစ်ပင် contre တက်ကောက်။ အတော်လေးအမှတ်ရစရာတစ်ခုခု ...
အခန်းကြီး 6: ဆင်တူ
ငါမနီးမဝေးအိမ်တော်ထဲကလမ်းလျှောက်သွားပြီခဲ့, ငါထိုသို့သောရနံ့လေကြောင်း qui အဲဒီကြက်သရေပန်းအမွှေးအကြိုင်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်ဓာတ်များကို dandelions, Clover, petunias, အမျှလိုက်ဖက်စွာအဘယ်မှာရှိရောင်စုံပန်းပွင့်ရောနှောမြက်၏ကြီးမားသောမျက်နှာပြင်ဧရိယာကတဆင့် strolled ။
ကျွန်မနောက်ကွယ်ကထွန်ကြောင်းတွေကိုကြည့်ရင်းကျွန်တော်ဖြတ်သန်းစဉ်ပန်းများညွှတ်လိုက်သည်ကိုသတိပြုမိလိုက်သည်။ ကျိုင်းကောင်များ၊ တမင်ငှက်များနှင့်အခြားပိုးတောင်မာများသည်သူတို့၏အတောင်များဖြန့်ကာဘုန်းကြီးသောမီးရှူးမီးပန်းများကဲ့သို့လေထဲတွင်ပျံသန်းကြသည်ကိုသတိပြုမိလိုက်သည်။ ငါအံ့ spect စရာမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောသက်သေခံခဲ့သည်။ ဤလှပသောမြက်ခင်းပြင်၌စိတ်လှုပ်ရှားစွာကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ခဲ့သည်။ "
ဒီအစိမ်းရောင်ကော်ဇောအပေါ်ကနေရောင်, feebly ကြီးတွေမီးခိုးရောင်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးနေဖြင့် filtered ICT ရောင်ခြည်တောက်ပနေပါသတဲ့။
ရုတ်တရက်မိုဃ်းကြိုးကှဲလမျးနောက်တွင်အလင်းရောင်တစ်အကြမ်းဖက်တဦးတည်းကို flash သည်, qui ငြိမ်းချမ်းရေးမိုးကောင်းကင်၌နန်းထိုင်၏နှောင့်အယှက်များနှင့်တစ်ဦးမိုးသည်းထန်စွာရေချိုးခန်းအကြမ်းဖက်လေပြင်းတိုက်ခြင်းအားဖြင့်တုန်လှုပ်မိုဃ်းမခပင်ပေါ်ပြပ်ဝပ်။ , ငါမိုးရွာရှောင်ကြဉ်နိုင်ရန်အတွက်အဲဒီသစ်ပင်တဦးတည်းအောက်မှာအမိုးအကာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သေလွန်သောသူတို့သည်အရွက်ဟာတိတ်ဆိတ်ရေကန်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အကိုင်းအခက်မှကျနေစဉ်သစ်ပင်အောက်၌စိုက်ထူရပ်နေငါအဘယ်မှာရှိအစိမ်းရောင်အရွက်များ, သစ်ပင်ရဲ့ထိပ်ဆီသို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များကြည့်, လေမှတဆင့်လှသောအားထုတ်။ ငါရပ်တန့်ဖို့မိုးရှာဘို့စောငျ့မြျှောခဲ့ဖူး, ငါသည်ကြီးမားသောရေ qui အရွက်၏ခြေလက်ပေါ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များအခြားတဦးတည်းကျပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည် watched ။ (Lancet) ??? ခိုင်ခံ့သောပင်စည်ဆန့်ကျင်မြှောင်နဲ့ကျွန်မအင်းဆက်ပိုးမွှားများ၏အကြီးအငွေပမာဏအဘို့မိုဃ်းကောင်းကင်ကျေးဇူးတင်ဖို့ရှိသည် croaking တစ်အိုင်၏ဘဏ်များအပေါ်များပြားလှသောဘားနားထောငျခဲ့လေးစား qui သူတို့ရဲ့ avid စပ်ထဲသို့ကျဆင်းခဲ့သည်။
မြစ်ရေသည်သဲကန္တာရတွင်ပိုမိုပြင်းထန်လာသဖြင့်မြစ်ကမ်းပါးမှထွက်ခွာရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ မုန်တိုင်းအတွင်းသစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ရတာအလွန်အန္တရာယ်ရှိပြီးမြစ်ကို ဦး တည်တဲ့မြက်ပင်ကတဆင့်ပြေးနိုင်အောင်တချိန်တည်းမှာပြောခဲ့တာကြောင့်ရုတ်တရက်၊ ငါဟာအန္တရာယ်ရှိနေပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။ ငါကလုံးဝအသက်ရှူထဲကရောက်ရှိခဲ့သည်နှင့်ငါ့ဝိညာဉ်ကိုပြန်ပြောပြနိုင်ရန်အတွက်ဘဏ်ပေါ်မှာထိုင်လေ၏။ ဘဏ်၏စိုစွတ်သောရွှံ့ထူသောမြေကိုကျွန်ုပ်ထိမိလျှင်ခဲယဉ်းသောအလင်းရောင်သည်ကောင်းကင်၌ပဲ့တင်ထပ်နေပြီးကျွန်တော်အမိုးအကာအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သောသစ်ပင်ကိုရိုက်ခတ်ခဲ့သည်။ “ ငါဒီနေရာမှာနည်းနည်းထပ်နေသေးရင်ကော။ ငါစဉ်းစားမိတယ် ငါအလွန်တုန်လှုပ်ချောက်ချားပြီးအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲငါသေလုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်မဖြစ်။ …သန္ဓေသားအနေအထားဖြင့်ကောက်ကောက်၊ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကြည့်သည်၊ st blanc non ??) ရဲရင့်သောယောက်ျားလေးတစ်ကောင်သည်လေထဲတွင်ကြီးမားသောစက်ဝိုင်းပုံသဏ္toာန်များကိုစတင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးမိန်းမနားအနီးရှိရေပေါ်သို့ဆင်းသက်ခဲ့ပြီးလှပသောအဖြူရောင်အမွေးအတောင်များကိုလှုပ်ခါခဲ့သည်။ ဒီပြပွဲကကျွန်မကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။
မိုးရွာနေတုန်းပဲတွေဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းဖြင့်တုန်လှုပ်သည်, မြက်ခင်းပေါ်ဆင်းဖို့ငါကမသိခဲ့ရည်မှန်းချက်ဆက်ပြောသည်။ ငါ qui entre les အစိမ်းရောင်နှင့်အညိုရောင်ပင်လယ်ရေညှိငါ့လက်နဲ့ငါ့ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး, ထိုင်လျက်နှင့်ငါးရေကူးမှာအံ့ဩ။ ထို့နောက်ရုတ်တရက်ကြည်လင်သောရေထဲမှာငါ့လက်ကိုဇောက်ချပါဝင်လာငါတဦးတည်းဖမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ အပြုံးမျက်နှာ, ငါကသာရွှံ့ပါရှိသောရည်ရွယ်ထား, ရေထဲကနေနှင့် ouvert ငါ့လက်ကိုနုတ်ထွက်သွားကြသည်။ ဒါပေမဲ့ဒါဟာဘဝကိုအပြည့်အဝဖြစ်ခဲ့သည်: အတော်များများပိုးကောင်များ, GRUB, မွှော့, ဂဏန်းကွက်များနှင့်အခြား animalculae ပြိုကွဲ၏လုပ်ငန်းစဉ်၌ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပုန်းအောင်းခဲ့ကြတဲ့။ Haughtily ငါကမ်းပေါ်မှာဤဖုန်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့တယ်။ ထိုအခါငါဈဘဏ်ချွတ်ချော်တဲ့အခါမှာငါ့လက်ကိုဆေးကြောဖို့ကိုထောက်ခြင်းနှင့်ရေထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါရေကူးလို့မရဘူးသောကြောင့်ရှိတယ်, ငါနိုင်သကဲ့သို့အသံကျယ်ကြွေးကြော်ခဲ့ကြသည်။
ရေကန်၏မိုးအုံ့ရေထဲသို့နစ်မြုပ်ငါလက်များ၏ချုပ်ကိုင်ထားခံစားခဲ့ရသည့်အခါရေနစ်သွားလို့ယူဆခဲ့။ မမျှော်လင့်ဘဲ, တစ်စုံတစ်ယောက်သည်သေမင်း၏ခြေသည်းမှငါ့ကိုနုတ်ထွက်သွားကြသည်။ ငါ့ခမည်းတော်ရုံငါ့ကိုကယ်ဆယ်ခဲ့။
ငါ့အသက်ကို၏ဤအတွေ့အကြုံကိုများ၏ဆင်တူလွမ်းဆွတ်မှုနဲ့ငါ့နှလုံးနှင့်ပြည့်၏။ ငါ, ငါ့မိသားစုနှင့်အတူသုံးစွဲစာတမ်းကောင်းမွန်သောကြိမ်, ဝမ်းမြောက်ခြင်းကြိမ်, ရယ်မောခြင်းလွဲချော်တင်းမာမှုများ၏သြစတေးသောက်နှင့်, ငါသည်အိပ်ပျော်ကလေးဘဝအမှတ်တရများအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
အခန်းကြီး 7: သဘာဝတရားနဲ့အညီ
နောက်တစ်နေ့မနက်မှာကျွန်မရဲ့ဂုဏ်အသရေအတွက် Concerto ဖှဲ့စညျးခဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် qui ၏သံပြိုင်နဲ့အတူနိုး။ တေးသီးသံတစ် cacophony ရောင်စုံငှက်တို့သည်လည်းငါ့ဦးခေါင်းအထက်ရှိခဲ့စဉ်အပင်တစ်ပင်ပေါ်မှာဆောက်ထားတဲ့တစ်ဦးသက်တံ့ကဲ့သို့သောအမွေးအတောင်နဲ့ကြက်တူရွေးစတင်ခဲ့သည်။ စည်းချက်ညီညီ, အခြို့လျင်မြန်သွက်လက်ချင်ပန်ဇီမျောက်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များတယောက်ကိုတယောက်နျဌာနခှဲကနေခုန်ချ။ မျောက်နှင့်မျောက်၏အခြားအမျိုးပေါင်းသစ်ပင်များပေါ်မှာဆွဲထားခဲ့ပင့်ကူ, ဇောက်ထိုးဦးခေါင်း, မျက်နှာများအောင်နှင့်ငါ့မျက်မှောက်မှာ shrieking ။
ငါထငါ၏ကိုယ်နှင့်အသစ် Adventures ၏ search အတွက်သစ်တောသော်လည်းလမ်းလျှောက်ဖို့တင်းမာ Decided ဖြေလျှော့ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆန့်။
ငါ၏ရှေ့မှောက်၌မြင်သောအခါငါသည်နောက်ချေးကိုတစ်ဘောလုံးကို လုပ်. ခဲ့သူကားအဘယ်သူတစ်ဦးနောက်ချေးပိုးနဲ့တူ icts အကြာတွင်အမွေအနှစ်တွေနဲ့ icts အသိုက်ကလှိမ့်, အမျိုးမျိုး woodlice, ပိုး, မျော့နှင့်အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေနဲ့ဂါဇံဟာ damp မွကွေီးပျေါမှာသွားလာ တစ်ဦး Acrobat ။ , သန့်ရှင်းသောပိုး၏ချဉ်းကပ်မှာသေးငယ်တဲ့ဖားခြေထောက်နှင့် icts ဝေးကနေခုန်ပြန့်နှံ့; ရှိပါတယ်တဲ့သေးငယ်တဲ့သစ်ပင်ဖား qui ငါ ICT ပြီးအရေပြားမှတဆင့်လှသောရိုက်နှက် icts နှလုံးကွညျ့ရှုနိုင်အောင်ရှိသည်ဟုစိုးရိမ်နေခဲ့သြစတေးခဲ့။
ထို့ပြင်ငါလွန်မိပြီလိပ်ပြာ၏အကအခုန်များနှင့်ငှက်-ယင်ကောင် qui မျက်မြင်အထက်တွင်-The ပျံသန်းသူတို့ရဲ့အရောင်အဝါတို့ကဆွဲဆောင်ပန်းပွင့်။ ထို့နောက်ငါယူကလစ်၏ပန်းပွင့်ပေါ်အနားယူနေတဲ့လိပ်ပြာ၏ shimmer ခြင်းဖြင့်ယစ်ခဲ့, qui တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကစေ့ဆျောတဲ့သတ္တုအပြာအရောင်များ၏အတောင်ပံပျေါထှနျးခဲ့။
ဖြည်းဖြည်းချင်း, ဒီ lepidopteron တစ်ဦးပျင်းရိပုတ်သင်ညို, အညိတွယ်အတွက် dissimulated ငါမြင်သောအခါဒါကလှပသောပန်းပွင့်ရဲ့ဝတ်ရည်တစ်ချုံ၏အဓိကအား, icts protractile proboscis အတူလုပ်ပြီး Extract ခဲ့အကြောင်းကိုလှည့်လည်။
ပြောက်ကျား၏မာစတာ, ထိုပုတ်သင်ညိုအရောင်ကိုပြောင်းလဲသူ့နိုင်ခြင်းအားဖြင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အသားစားဖြစ်သက်သေပြပြီးတိကျတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဆင်ပြေအောင်။ ငါသည်ဤငါ့မျက်စိများ၏ရှေ့မှောက်၌ဖြစ်ပျက်ပါစေရန်ငြင်းဆန်ခြင်းနှင့်ကချွတ်တွှေမှလေထုထဲတွင်ကြီးမားသောလှုပ်ရှားမှုများကိုအောင်, လိပ်ပြာဆီသို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များတဟုန်တည်းပြေး။ အဆိုပါလိပ်ပြာဝေးပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဂုဏ်ယူခဲ့။
ပျော်ရွှင်စွာမြည်, ငါသည်အခါ, ချမ်းသာတဲ့ပြည်နယ်ထဲမှာ, သယ်ဆောင်လမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါသည်, ငါပင့်ကူ qui ကြက်ဥ icts lay မှမြေ၌ငှက်သိုက်တူးခဲ့တဲ့ကြက်သရေအနက်ရောင်, ငွေထောင်ချောက်တံခါးအနှံ့သို့ရောက်ကြ၏။
အဆိုပါရဲပင့်ကူကို web ICT, Method နှင့် Precision တစ်ဦးဆင်းလှသောအစ်မ, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအစား, တောက်ပခြင်းနှင့်စင်ကြယ်သန့်ရှင်းသောအဖြူရောင်ပင့်ကူအိမ် spinning ခဲ့။ ငါကရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ဂရုတစိုက်တစ်ဝှမ်းသွားလာ။
ငါအမျိုးမျိုးသော Citrus အသီးအပွနှင့်အတူ teeming တော၌နက်ရှိုင်းသွားလာသကဲ့သို့ငါရှေ့မှာမ hallucinogenic မှို၏သက်ရောက်မှုညဉ့်ကိုခံစားခဲ့ရသောကြောင့်, ငါကသူတို့ကိုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကျပ်။ ထိုညဉ့်, ငါကြောက်လဝဒေနာခံခဲ့နဲ့ကျွန်မတော့ဘူးကြောင့်မလိုချင်ခဲ့ပါဘူး။
ငါအလုံအလောက်စားပြီးတဲ့နောက်ဒီဒုက္ခတွေအားလုံးကနေငါလွတ်မြောက်နိုင်မယ့်နေရာတစ်ခုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ခရစ်ကက်သည်သူတို့၏ညနေခင်း၌သီချင်းသီဆိုရန်နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုခံရသည်။ ရုတ်တရက်ခြေလှမ်းအနည်းငယ်လှမ်းလိုက်တဲ့အခါကျောက်တုံးထဲမှာတွင်းတပေါက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူကဂူထဲဝင်တာနဲ့တူတယ်။
ဥမင်၏အဖွင့်ရှေ့တွင်ကျွန်ုပ်ခဏတာရှိနေပြီးကောင်းကင်သို့မျှော်ကြည့်နေမိသည် -“ ဘုရားသခင်၊ “ အဲဒီမှာဘုရားသခင့်စွမ်းအားတော်ကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတဲ့အခါဒူးထောက်ပြီးဒူးထောက်ပြီးဆုတောင်းနေတော့တယ်။ ဘုရားသခင်ကျွန်တော့်ကိုဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူး၊ သူကကျွန်တော့်ကိုစောင့်ရှောက်နေတုန်းပဲဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ။ ကျွန်ုပ်၌ယုံကြည်ခြင်းများစွာရှိလျှင်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအဘယ်ကြောင့်သံသယဖြစ်ခဲ့သနည်း။
ဒီအခိုက်မှာငါ့မျက်စိ lachrymal ပုလဲငါ၏အဆွန်းပါးပေါ်ထွက်ပြေးကြကုန်အံ့။ ထို့နောက်ငါ့လက်၏နောက်ကျောနဲ့ငါ့မျက်ခမ်းကိုတက်ရှင်းလင်းငါထဥမင်အတွင်းမှအရှိန်မြှ ...
အခန်းကြီး 8: စိတ်ထိခိုက်မွေးဖွားခြင်း
ငါဥမင်အမှောင်ထဲမှာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့ချော်အခါ, လင်းနို့တစ်ဦးသည်မိုဃ်းတိမ်သည်မှောင်မိုက်၌ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ဥမင်ထဲကထွက်ပျံသန်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်သွားပြီမာနေ့ကုန်, ငါဂူ၏မွို့ရိုးကိုဆန့်ကျင်ထိုင်ဝင်ပေါက်အသုံးပြုပုံပြီးနောက်အိပ်ပျော်မိနစ်အနည်းငယ်ကျဆင်းခဲ့သည်။
ကိုယ့်မျက်စိ ouvert အခါပြီးနောက်နေ့, ငါ horsefly qui ဖြင့်ကိုက်၏ throbbing နာကျင်မှုညဥ့်အခါငါ့အရေ perforated ဖူးသလိုခံစားရတယ်။ ငါရောင်ခြည်အလင်းအိမ် (ဥမင်၏အဖွင့်) မှတဆင့်ထွန်းလင်းဖို့သစ်သားကျေးဇူးတင်စကားတစ်အပိုင်းအစတွေ့ရှိရန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်တုံ့ထ nonchalantly ငါမြေအောက်၌ငါ့တိုးတက်မှုလျှောက်လုံးမီးရှူးတိုင်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်မယ်လို့ဌာနခွဲဆီသို့ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များသွားလာ။ ကျွန်မဖတ်နဲ့ကျွန်မမွကွေီး၏နက်နဲသောပင်လယ်၌ငါ့ရှည်လျားသောခရီးကိုစတင်ခဲ့တယ်။ အဆိုပါမီးရှူးတိုင်ငါထာဝရမှောင်မိုက်၌ငါ၏အတုန်လှုပ်လက်သွန်း icts အတွက်အားလျော့ gleam ကျင်းပ။ ငါကျဉ်းမြောင်းနှင့်အကွေ့အကောက်များသောမြေအောက်ထဲမှာတစ်ဝက်ကွေးလမ်းလျှောက်ခဲ့။ အခြိနျမှနျမှကျွန်မအသက်ရှုဖမ်းရန်အကြိမ်အနည်းငယ်ရပ်တန့်, ထိုအခါအကြှနျုပျသလိုင်အတွက်ပိုမိုနက်ရှိုင်းကဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံသို့ဤကျဆုံးမှာတော့ကျွန်မအအေးထိုးဖောက်မှုငါ့ကိုယ်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှလက်မခံစားရနိုင်နှင့်ငါ့အဆုတ်ကျုံ့ပြီးသေဆုံးပန်းပွင့်နှင့်တူ writher ။ မကြာခင်မှာပဲ, ငါ့အသက်ရှူ est ဘွယ်ရာ devenu ။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းမိုးသည်းထန်စွာနှင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်လေ, ဒီမီးလျှံ flickered နှင့် qui ပြင်းထန်မှုကိုဆုံးရှုံးငြိမ်းအေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ငါလိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးတော့အပြည့်အဝသည်မှောင်မိုက်၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေ့ရှိရန်အကြောင်းကိုခဲ့ကျွန်မရဲ့မျက်စိများ၏ရှေ့မှောက်၌ကျယ်ပြန့်ပြခန်းကိုမွငျလြှငျ, ဤမြေအောက်၏ဝင်္နောက်မှာကြာလမ်းလျှောက်။
မြေပြင်၏ဝမ်းထဲမှာ stalagmites နှင့် stalactites အချို့သည်ထုံးကျောက်လုပ်ကွက်ကြီးမားသောပင့်ကူအိမ်ရှိပြီးငါကတစ်ဦးအကူအညီမဲ့လုယူရာဥစ္စာတူဖန်ဆင်းတော်မူသော။ ဒီသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့စွန့်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်ငါအနီးကပ်နက်နဲသောအရာရှေးပဝေအခြိနျ မှစ. အကြှနျုပျကို qui ပျေါထှနျးခဲ့မြေအောက်ခန်း၏နံရံမှထားရှိမည်။ ထိုအရိုးကိုတွင်, ငါအမဲမြင်ကွင်းများကိုယ်စားပြုကော်မတီဂူပန်းချီကားများနှင့် funerary နေဖြင့်စဉ်းစားရခက်ခဲ့။ ဥမင်၏ကျောက်ဆောင်ပေါ်ထွင်းဒါက parietal အနုပညာအတိတ်ကာလကိုပြန်မသွားငါ့ကိုထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်ပေး၏:
ကျွန်မထက်ပိုငါးခုတန်ချိန် mastodons facing နဲ့စရိုက် devices များနှင့်အတူခန့်မှန်းရခက်ရာသီဥတုဆိုးရွားနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှပြီးလျှင်, လှံကိုင်ပြီး, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ကူး။
ငါ Australopithecus နှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် APPROBATION သကဲ့သို့ငါ, ငါ့ပါးလွှာခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်ဖြည်းညင်းစွာရွေ့လျားသည်သေမင်း၏ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံစားခဲ့, ငါ့နှလုံး pulsation တိုးမြှင်နှင့်ငါ့နှလုံး၏အလွန်အကျွံရိုက်နှက်ငါ့ကိုဒါဟာပါးလွှာအရေပြားဖောက်အသုံးပြုပုံအကြမ်းဖက်ထွက်လာမလားဒါကအံ့ဩခံစားမှုတို့ကိုပေးလေ၏။ ငါမြင်သောအခါ, ကျောက်, မြေပြင်ပေါ်တွင်ရွှဲဒါကထံမှ oozed ရေ treacle ငါ၏အလက်ဝဲရင်သားကိုကိုင်ပြီးနှင့်နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုကိုကြောက်ရွံ့ crouched ။ ရုတ်တရက်ကျွန်မ Ariane ခဲ့ဘူးနဲ့တူ icts ဦးဆောင်လမ်းပြအတိုင်းလိုက်နာရန်တောက်ပစိတ်ကူးခဲ့ငါတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးဒီသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့စွန့်ခွာဖို့ကြိုးစားနိုင်ရန်အတွက်အတူတကွကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဲ။ seepage ရေပြိုင်ပွဲအပြီးတွင်ငါမြေပြင်ရေ qui တမိုက်ထဲမှာ run ကိုသတ္တုကဲ့သို့သောစစ်မှန်တဲ့ဂွဖြစ်လာခဲ့ပြီးအဘယ်မှာရှိရာအရပျမှာရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အဲဒီမှာငါ့ဦးခေါင်းထိပ်ပေါ်မှာဆိုင်းငံ့, ဒီနှစ် Damocles တစ်ဦးထားကဲ့သို့အကြှနျုပျကိုနှိမ့်ချလဲကြီးမား stalactite ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ငါမရွှေ့နိုင်နှင့်မဆိုပိုကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလုပ်ခဲ့။ ငါအကြိမ်အနည်းငယ်ထင်နှင့်နောက်ဆုံးတော့ငါဂွန၏ကြည်လင်သောရေထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိုးမယ့်ကြီးမြတ်လှုံ့ဆော်မှုရရှိခဲ့။
ငါရုံအနည်းငယ်မီတာငါ့ကိုအထက်ရေကိုတဆင့်ထွန်းလင်းအလင်းကိုမြင်သောအခါခန့်မှန်းခြေမိနစ်စဉ်အတွင်းငါ၏အအသက်ရှူကိုင်ပြီးကျောက်ဆောင်ရှောင်ကြဉ်ဖို့ကြိုးစားနေကြိုးစားပြီးရေကူး။ ငါကြွေးကြော်သံနှင့်အတူဖောင်းကြွမျက်နှာပြင်မှာထွက်လာမှပိုမြန် paddled ။
မြေအူကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်, ငါသည်ရုတ်တရက်ငါ့နောက်တစ်ခုခုခံစားမိတဲ့အခါ, လျော်ရှူဖို့ဘဏ်ပေါ်မှာထိုင်လေ၏။ ငါအုပ်စိုးတစ္ဆေအလုအယက်ကဲ့သို့သောအနက်ရောင်အရိပ်ကိုမြင်ရုံအချိန်အတွက်လှည်။
အခန်းကြီး9Expiatory အနစ်နာခံ
ငါသည်ငါ့မျက်ခမ်းပြန်ဖွင့်သောအခါ, ငါများ၏ရှေ့မှောက်၌ထူးဆန်းတဲ့မျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောမျက်မြင်။ ကျွန်မရှေ့မှာငါသည်တပြင်လုံးကိုအသက်တာ၌ထိုသို့သောလိုက်တယ်အသွင်အပြင်နှင့်အတူလူမမြင်ဖူးသောခဲ့။ သူတို့ကခဲစုတ်များနှင့်ဖုံးလွှမ်း, ဆိုးဆိုးရွားရွားညစ်ပတ်ကြ။ သူတို့ရဲ့ဆံပင်တွေရှုပ်ပွသူတို့ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာလှဲခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏မျက်လုံးအမျက်ဒေါသနှင့်အတူ gleamed ။
တစ်ဦးကအလွန်အမင်းကျွမ်းကျင် wizard ကိုဆနျ့ကငျြဘရက်စက်ရှာဖွေနေ, ကျယ်ပြန့်မီးရှိပါတယ်ရပျတညျခဲ့။ တစ်ဦးဦးခေါင်းခွံကနေသေအရိုးတို့နှင့်ဖန်ဆင်းတော်လည်ဆွဲ, ထွင်းထုနှင့်လူ့အရိုး openwork ခါးစညျးရှေ့ဖုံး, အခါးပတ်မှာကျင်းပမှော်ဓားမြှောင်: မိမိဝတ်ထားအနက်ရောင်မှော်အဆင်တန်ဆာခဲ့။ သူကကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့်ငါနှင့်ငါ့နှလုံး froze သတ်ပစ်လျှင်အဖြစ်မျက်စိပျံတတ်သောမီးနှင့်ငါ့ကိုမှာငေးကြည့်။
ငါ၏အဦးတည်လာမယ့်, သူကအနိမ့်အသံအပေါ် droning နှင့်လှသော gesticulated ခဲ့။ သူဟာစီတန်းနှင့်ခိုင်ခံ့သောမှော်အတတ်တန်ခိုးရှိ၏ဝိညာဉ်ဖို့ပြောနေတာခံရဖို့သလိုပဲငါ့ကံကြမ္မာဟာသဘာဝလွန်နှင့်အတူဤအင်တာဗျူး၏ရလဒ်ကိုအပေါ်မှီခိုနားလည်ဘယ်သူ Magus ကခဲ့သည်။ နတ်ဆိုးသူတို့ရဲ့အမျက်ဒေါသသက်သာစေနိုင်ကြောင်းဖို့ငါ့ယဇ်တောင်းဆိုလျှင်အဖြစ်လေတိုက်မြည်တမ်းကြနှင့်တော့မှာပဲ။ ကိုယ်ကိုမီးရှို့မီးသွေးပေါ်တွင်ဧရာမအိုးကိုမြင်သောအခါငါ့မျက်နှာအစိမ်းရောင်လှည့်။ ညစာအဘို့အကြှနျုပျအားစာတမ်း cannibalistic က-ရှိအချိန်ဇယားရှိသနည်း အဆိုပါ wizard ကိုမိမိအမှော်ဓါးနုတ်ထွက်နှင့်ငါ့လက်ကို lacerated ။
လျှော့ချဖြတ်တောက်မှု မှစ. ဖိုင်ကိုစီမံ magus သူအလျင်အမြန်ပန်းကန်ထဲကသောက်သောအသွေး qui ၏သေးငယ်တဲ့ပမာဏရှိပါတယ်။ ရုတ်တရက်အဆိုပါ wizard ကိုတစ်ဦးမထိုက်မတန်ခဲ့နှင့်တစ်ဦးရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာမြန်နှုန်းမှာလှည့်လည်ခြင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်လည်မှစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ရုတ်တရက်မြေပြင်ပေါ်မှာလှဲချလုပ်ကြံလေ၏။ သူကတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့ဤအနေအထားတွင်ဆင်းရှိခေါင်းထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းအကြှနျုပျကိုသူ၏ဦးခေါင်းနှင့်သူ၏ပုံသေမျက်စိကြီးပြင်းရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လင်းလင်းသူတစ်ဦးကြက်သားကိုရောက်စေဖို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုမေးမြန်းရာ။ သူကြီးအဖြူကြက်သား၏လည်ချောင်းကိုခွဲနှင့်စခန်းများ၏ဖုန်ထူမြေပြင်ပေါ်တွင် icts အသွေးတော်ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ငါ Magus ရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာနေတဲ့မောအပြုံးတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ဘုရားကဒီရေစက်သွန်းကောင်းမွန်သောအတိတ်နိမိတ်၏ပူဇော်သက္ကာကိုလက်ခံကြပြီ။ နောက်တဖန်ငါနှင့်ငါ့လွှတ်ပေးရန်အမိန့်ပြင်းထန်စွာ, qui ကအလျင်အမြန်လူမျိုးစုအဆင့်ဆင့်အတွက်ကြီးမားသောမာစတာယုတ်ညံ့နှစ်ခုလက်ထောက် Shamans အားဖြင့်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့ cam ဆီသို့သူ။ ငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုထိုအခါအကြှနျုပျသဘာသာရေးအခမ်းအနားအဆုံးသတ်မလားဘယ်မှာအနွယ်၏ကျန်နှင့်အတူမီးဝန်းကျင်စုဆောင်းရန်အားကြားပြောလေ၏, ပေါ်မှာမှောင်မိုက်ဖွဲ့အစီအမံတစ်ခုကြင်နာလျှောက်ထားခြင်းဖြင့်လောင်းငါ၏အသွေးရပ်တန့်, ငါခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကိုမှလွတ်မြောက်ခဲ့။ အိုးချွတ်အတွက်ကြက်သားချက်ပြုတ်မီ, Shaman ကြက်သားများ၏အူဖယ်ရှားခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကပြန်မှော်ရိုးရာဓလေ့ခဲ့။ သူတို့ဟာပြစ်ဒဏ်အတွက်ယဇျပူဇျောခံရမလားဘယ်သူမှကိုယဇ်ပလ္လင်နှင့်ဘယ်သူမှဥက္ကဌပါဘယ်သူကြီးတွေ magus မှလွဲ. ပြောဆိုရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည့်ရိုးထုံးတမ်းစဉ်ကာလအတွင်းသန့်ရှင်းသောအခမ်းအနားကဲ့ရဲ့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ခဲ့သို့မဟုတ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဘုရားကိုလွန်ကျူးမှာနောင်တရပါ့။ ကံကောင်းထောက်မစွာဒီဖြစ်ပျက်သည်မဟုတ်။ ငါမယ့်အစားအဘို့ဆောင်သောပွဲများအတွက်ချက်ပြုတ်တအဖြူဖြစ်ခြင်း၏ဤကြက်, ဘဲစားရန်ဝမ်းသာသွားတယ်နဲ့ကျွန်မအကြီးအပျြောအပါးနှင့်အတူတစ်ခုချင်းစီလုတ်ခံစား: အမျှဝေးငါအတှကျခဲ့သကဲ့သို့, ရိုးရာဓလေ့ကျနော်တို့စီစဉ်ထားကြပါပြီလေ၏။ အခမ်းအနား၏အဆုံးမှာငါတဲခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်နှင့်ညဉ့်စဉ်အတွင်းတယောက်တည်းကျန်ရစ်သောငါငေါ့မှတ်ချက်တွေ, ထိုရယ်မောခြင်းနဲ့ကျွန်မသူတို့ဟာ Said ကဘာလဲနားလည်ခြင်းမဇာတိရည်မှန်းချက်၏ palaver စကားကိုနားထောငျလို့မရပါ။ ငါကွဲပြားခြားနားသောလှညျ့ကွညျ့မိတဲ့နှင့်သူတို့ကလာမယ့်နေ့ရက်ကာလ၌ငါ့အကြောင်းကိုအဘယ်သို့ပြုရပါမလားအဘယ်ကြောင့်အိပ်မက်, ငါမှ လာ. အဘယ်မှာရှိသူတို့ကလုံးဝအံ့သြထင်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ငါ၏အအိပ်မပျော်၏သားကောင်, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ငါ၌အဖြစ်ပျက်ပါ့အဘယ်အရာကိုမေး။
တဖန်ငါငါ့မိသားစုကိုတွေ့မြင်နိုင်မလား? ငါအမည်မသိနေရာကိုခစျြဒါကအားလုံးသူများသည်စွန့်ခွာဖို့ကျွန်မကိုအတင်းအဓမ္မပြန် la meme qui ယဉ်ကျေးမှုကိုသွားမလား?
ငါလူ့ယဉ်ကျေးမှု၏ချည်နှောင်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေမယ်လို့ဘယ်မှာဤကောငျးကငျကျွန်းကိုတွေ့ခဲ့ပေမယ့်တချို့လူတွေပြီးသားယခုရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ငါလုံးဝခေါ်ရန် Society ၏ကွဲပြားခြားနားသောတောင်းဆိုချက်များကိုဖို့အဆင်ပြေအောင်ခဲ့ရသည်။
ပထမဦးဆုံးမျက်မှောက်မှာဤအ Savage ငါတစ်ချိန်ကပိုပြီးငါ့သမာဓိနှင့်ငါ့လွတ်လပ်မှုကိုချွတ်ဖို့အခြေခံဥပဒေနှင့်အနွယ်များနှင့်စွန့်စားမှုများ၏မညီကြောင်းကိုလက်ခံရန်မကြာမီခဲ့ရည်မှန်းချက်မဆိုဥပဒေပြုမရှိရင်ရှေးဟောင်းစနစ်၏နေထိုင်များ၏ခံစားချက်ကိုပေး၏။
အခန်းကြီး 10: အခွင့်အလမ်းတှေ့ဆုံ
အရုဏ်၏ပထမဦးဆုံးအလင်းအိမ်မှာနေရောင် ICT ခေထြားအလင်း၏ရှုခင်းရေလွှမ်း။ တစ်ဦးကပုပ်-အနံ့ decoction ငါ၌အနာမှလျှောက်ထားခဲ့နဲ့ကျွန်မဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့်အမြစ်များကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဆေးကိုပေးတော်မူ၏။ ထို့နောက်မှော်လက်ချောင်းနဲ့အလွန်လှပသောအမျိုးသမီးတစ်ဦး massaged
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်နဲ့ကြင်ကြင်နာနာ, ငါ့အနာကိုယျခန်ဓာ။ ကိုယ့်တစ်ဦး mummy တူသောအလွန်သေးငယ်သော homeopathic lianas နှင့်အတူပူးတွဲပါအရွက်နှင့်အတူပတ်ရစ်ခဲ့။ ငါအချိန် Sami အဘိဓါန်မှာငါသည်တံခါးရှေ့မှာအလင်းကိုဆန့်ကျင်ဖော်ပြထားသောလှပသောဇာတိ၏သေးသွယ်ပုံကိုတွေ့မြင်နိုင်ပြီးတော့ထိုအခါတဲအတွင်း၌လာ, နီးပါးနေ့စဉ်တစ်ပါတ်အဘို့အကြှနျုပျ၏ပြန်ပေါ်အိပ်ရာထဲမှာလဲလျောင်းတည်းခိုနှင့်။ အဖြစ်မကြာမီငါသူမ၏အရိပ်မြင်သည်အတိုင်း, အားလုံးငါ့ဝိညာဉ်တစ်ခုအဆုံးမဲ့ချမ်းသာနှင့်ပြည့်စုံခဲ့။
မယုံနိုင်လောက်အောင်လှပတဲ့သူရိုင်းသောအဆင်းလှသောဤမိန်းမကကျွန်မကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ငါသူမကိုကြည့်ရှုသောအခါသူမ၏အကြောင်းကိုကျော်ကြားမှုတစ်ခုခု, ငါ့အလိုရှိသမျှအာရုံနိုး။ သူမ၏သံလွင်အသားအရေ၊ မျက်ခွံမျက်လုံး၊ ရှည်လျားသောအမည်းရောင်ဆံပင်နှင့်တောက်ပသောအပြုံးဖြင့်သူမသည်အလွန်လှပသောကြောင့်သူမ၏အား "ဟူရီ" ဟုအမည်ပေးခဲ့သည်။
ဒါဟာနတ်ဘုရားမအမြဲ la meme ရိုးရာဓလေ့လုပ်နေခဲ့: ငါ့ကောက်ရိုးမွေ့ရာအနီးဒူးထောက်သူမကညင်ညင်သာသာသူမပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးနဲ့ငါ့ poultices ပြောင်းလဲသွားတယ်ထို့နောက်ငါ့ကိုမွှေးကြိုင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့်အမြစ်များနှင့်ဖွဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဆေးပေးစေခြင်းငှါအကြှနျုပျခေါငျးကိုပေါ်ထွန်းစေတော်မူ၏။ သူမ၏မျက်စိသည်ငါ့မျက်စိ feverish တွေ့ဆုံခဲ့သည့်အခါသူမ၏ရှည်လျားသောဆံပင်လေပြေ၏ခြော့တူသောငါ့မျက်နှာကိုသုတ်သင်။
ကျွန်မဆွေမျိုးခဲ့လျှင်အဖြစ်သူမကငါ့ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးကို ယူ. သူမငါ့အရာဘေးမှာတည်းခိုငါ့ကိုကုမ္ပဏီစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးအထူးစေတနာပြသခဲ့သည်။ ငါသူမ၏သေးသူသည်ငါ့ဆီသို့ကျွေးနဲ့ကျွန်မစိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်အဝစိတ်မရှည်တစ်နှစ်နှင့်အတူစောင့်ရှောက်မှု၏စာတမ်းကြိမ်စောငျ့မြျှောခဲ့သည့်နူးညံ့ကြင်နာမှုများကတအံ့တသြခဲ့ရည်မှန်းချက်မသိခဲ့ပါ။
ငါသည်ငါ့ပြန်လည်နာလန်ထူခံစားရန်စတင်နဲ့ကျွန်မဒါဟာအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှမလားစေလိုကြောင်း။ တစ်ချိန်ကပျောက်ကင်းအောင်ကုသသောကြောင့်, အဘယ်အရာကိုနောက်တဖန်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်မလား?
အခန်းကြီး 11: နိဒါန်း
ငါအများကြီးပိုကောင်းခံစားခဲ့ရနှင့်ငါ့အမည်းလက်တွေ့ပျောက်သွား, သာအလင်းအမာရွတ်များထွက်ခွာ။ ငါသည်ငါ့ Houri ၏ခရီးစဉ်မျှော်မှန်းထားသည်ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကနေ့ငါကြီးမားသော Shaman တဲဝင်အကြီးအစိတ်ပျက်မိကြောင်းနှင့်အတူကိုမြင်တော်မူ၏။ သူသည်သူ့ ကျေးဇူးပြု. ဖှငျ့ငါ့ကိုအနီး crouched နှင့်လျှပ်ပေါ်သောစကား mumbling မြေပြင်ပေါ်တွင် cowry ခွံနှင့်အရိုးပစ်ချ၏။
အဆိုပါ wizard ကိုသေလွန်သောသူတို့သည်မေးခွန်းထုတ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်အဘို့, ဘိုးဘေးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုယူ _him_ မေးမြန်းရာကူညီပါရန်။ သဲပေါ်မှာဆွဲထူးဆန်းတဲ့ဆက်သွယ်မှု iconographic သင်္ကေတနဲ့ကိန်းဂဏန်းများ entre သူငါအမြိုးဝေစုဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက်သွားခဲ့သည့်ပေးနေတာ qui sketched ။
အဆိုပါ initiatory ရိုးထုံးတမ်းစဉ်ရှငျးနစိုးရိမ်မှုများသဘာဝလွန်တပ်ဖွဲ့များကသတ်မှတ်ခဲ့။ ငါပျံသန်းသောအရောင်အဆင်းနှင့်အတူ Initiative ၏ကန့်သတ်စက်ဝိုင်း join ဖို့ငါ့ကို enable မယ်လို့ဘယ်သုံးမျိုးစမ်းသပ်မှု, အောင်မြင်နေရပါတယ်။ ဤစက်ဝိုင်းသီးသန့်ယောက်ျားမှ reserved ခဲ့။ ဘဝသည်ဤစတင်တစ်ခုမှာပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်လွတ်လပ်သောဖွစျလာတဲ့အခါ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေလူကြီးဖို့အကူးအပြောင်းကိုကိုယ်စားပြု။ သာယောက်ျားမိန်းမတို့နေဆဲရုပ်ပစ္စည်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့၏ခင်ပွန်းအပေါ်မူတည်ပြီးလွတ်လပ်မှုကိုခွင့်ပေးခဲ့သည်။
ပထမဦးဆုံးစမ်းသပ်မှု၌ငါအထီးကျန်နှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဒါကိုကိုင်တွယ်ဖို့ qui တစ်နှစ်တစ်ဦးချင်းခံစားမိနိုင်အားလုံးကြောက်စိတ်နှင့် psychoses ၏ကြောက်ရွံ့စာလုံးပေါင်း၏ထိနျးခြုပျဖို့ရည်မှန်းခဲ့သည်။ ငါသည်ဤလှပသောသစ်တောသို့ပြန်လာထိုသုံးရက်ဖြုန်းသွားခဲ့။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုအကြှနျုပျ၏သတ္တိနှင့်ငါ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုစမ်းသပ်နိုင်ရန်အတွက်နွယ်စုများ၏အများစုမှာခွန်အားကြီးသောသူတစ်ဦး contre တိုက်ပွဲအနိုင်ရခဲ့။ တတိယနှင့်နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုမှာတော့ကျွန်မရဲ့အသိဉာဏ်, အနုပညာကျွမ်းကျင်မှုစမ်းသပ်ဖို့နှင့်ငါ့ဖန်တီးမှုစွမ်းအင်ဖြန့်ချိနိုင်ရန်အတွက်, ငါ့ကိုယ်လက်နှင့်ကိုယ်အနုပညာအလုပ်ထုတ်သယ်ဆောင်ရန်ခဲ့။
ဘယ်သူမှငါ့အနိဒါန်းအတွက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း Get သို့မဟုတ်မဆိုလမ်းထဲမှာငါ့ကိုကူညီပေးဖို့အခွင့်အာဏာခဲ့။ ဘဝ၏ပေါ်ဖြစ်ပေါ်အလားတူအခြေအနေများနှင့်ရင်ဆိုင်ရရန်, အတိတ်ကာလ, ငါ့ကို enabled မိသောကြောင့်အပြင်, ငါမဆိုအကူအညီမလိုအပ်ခဲ့ပါဘူး။ ထိုသို့ငါသည်အချို့သောအဘိဥာဏ်တန်ခိုးရှိသည်နှင့်အများစုမှာနာမည်ကြီးဒလိုင်းလားမားနဲ့ကျွန်မလျောက်ပတ်သုံးစမ်းသပ်မှုစာတမ်းလုပ်ကြံခံထိုက်ငါ့ကိုထိန်းချုပ်ရှိပါတယ်ရရှိခဲ့သော။
ဒီနတ်ကိုးကွယ်လူတွေသဘာဝတရား၏ဝိညာဉ်၌များစွာသောယုံနဲ့သူတို့ကလေးစားသမှုဖြင့်ကုသသစ်ပင်များ qui အဘို့အမြင့်မားထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သောကြောင့်အပြည့်အဝလညဉ့်အခါ, ငါသန့်ရှင်းသောသစ်တောများ၏နွေးထွေးမှုအတွက်နောက်ဆုံးစက္ကမင်မင်္ဂလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ qui Initiative ၏အစည်းအဝေးတစ်ခု, ကြီးတွေ magus ကဥက္ကဌခဲ့ပါတယ်။ ငါ့ဦးခေါင်းရိတ်ခဲ့ပါတယ်နဲ့ကျွန်မအကြိမ်ကြိမ်ငါ့အဟောင်းများကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရရန်နှင့်ငါ၏ကိုယ်စင်ကြယ်စေနိုင်ရန်အတွက်ဆေးကြောခဲ့သည်။ ထို့နောက် wizard ကိုတစ်ဦးသဘာဝလွန်ဆေးနဲ့ငါ့ခန္ဓာကိုယ် coating နေချိန်မှာငါ့ကိုသန့်ရှင်းသောစကားများပြောနေထားရှိမည်။ ကြီး Magus တစ် hieratic အမူအရာအားဖြင့်အဆုံးသတ်အခမ်းအနားကို: _him_ များ၏ရှေ့မှောက်၌ငါ့ဦးခေါင်းကွေး, သူအများစုမှာပြင်းထန်ကြည့်အောက်မှာငါ့ကိုဖန်ဆင်း, တိတ်ဆိတ်ခြင်းနှင့်ရိုးသားမှု၏ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသော, ထိုအခါသူသည်ငါ့ကိုတစ်ဦးမျက်နှာကြက်နှင့်အဖြူရောင်မြှား, သင်္ကေတကိုပေး၏ ယု၏။ ထို့နောက်ငါအစပျိုးညီအစ်ကိုတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအနာဂတ်များကဲ့သို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့၏နာမ၌ချီးကျူးခဲ့။
နံနက်စောစော, အနီရောင်နေရောင်, ICT တွင်းနှင့်မီး၏ဤဘောလုံးကို၏ပြန်ပေါ်လာထဲက cam ဖြစ်တည်မှုပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ၌ငါ၏ကိုယ်အခြားစနစ်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပုံဆောင်သည်။ Officiellement ငါအနွယ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီးနဲ့ကျွန်မအခြားဘဝကိုစတင်ပြန်လည်မွေးဖွား။
အခန်းကြီး 12: မွငျ့မွတျပြည်ထောင်စု
နက်ဖြန်နေ့၌, Houri လက်ထပ်ငါ est devenu, ဒီ enchantress qui အားနည်းခြင်း၏ငါ၏အကြိမ်စဉ်အတွင်းမေတ္တာသူမ၏ filter ကိုနှင့်ငါ့ကိုပညာမဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါ၏အဂုဏ်ပြုတဲ့ကျင်းပပြီးစီးဤကွီးစှာသောအခမ်းအနားအတွင်းမှာတော့ငါသီခငျြးမြား၏ညီညှတျသရုပ်ပြငါ့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌လွန်မိပြီကခုန်နေဖြင့်ဝမ်းသာသွားတယ်။
အခမ်းအနားရဲ့အစမှာ, သိပ်ပြီးထိုအခါသူတို့ကပိုပြီးလှသောအားထုတ်ခြင်း, djembe ၏နှေးကွေးသောစည်းချက်လိုက်ကြ၏။ တချို့ကနတ်မင်းကြီးအစဉ်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့လျှင်အဖြစ်ဤအအမျိုးသမီးများ, ဖြည်းဖြည်းတင်ပါးရွေ့လျားနေဖြင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်အားထုတ်။ လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စွမ်းအင်၏ဤသံစုံတီးဝိုင်းစုံလင်သောအညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့တစ်တွေနည်းနည်း dervishes '' em န်းကျင်စွမ်းအင်တစ်ခုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရေအတွက်ထွက်ခွင့်ကဲ့သို့လက်နက်ဆန့်, စက်ဝိုင်းထဲမှာအားထုတ်။
အဆိုပါပတ်သာ၏အသံမှာ, ဇာတိသူတို့၏လက်စွဲမယုံနိုင်လောက်အောင်လှပသောမျက်မှောက်၌ပွဲဝင်သောကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ငါ့ကို offert ဂီတ၏တစ်ခုရဲ့ tempo မှသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရွှေ့ခဲ့၏ဘယ်သူသိပ်ပြီးအားပေးဖို့ clapped ။ ဤရွေ့ကားကခုန်ငါ '' em စောင့်ကြည့်သငျသညျအကြှနျုပျကိုအားပြုဆန်းကြယ်မှုများနှင့်သွန်းတဲ့စာလုံးပေါင်း၏ကြင်နာခဲ့ကြသည်။ ငါလုံးဝငါ့ထံသို့လာမယ့်ထိုင်လျက်အံ့သြအမျိုးသမီးနှစ်ဦး Call ခဲ့သည့်အခါတစ်ဦးလုပ်ကွက်များအတွက်လက်ဖြင့်ငါ့ကိုမခေါ်သွားတယ်။ ထို့နောက်ဂီတ est devenu ပိုမိုမြန်ဆန်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကျယ်လောင်ပြီး hectic အရှိန်အဟုန်ရရှိခဲ့။ ဂီတကိုသင် icts အထွတ်အထိပ်ခဲ့သည့်အခါရုတ်တရက်သည်, drum ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်လူတိုင်းနေဆဲနေ၏။
ထို့နောက်ငါပြန်နေရာတိုင်းကနေလာမယ့်အသံကျယ်လက်ခုပ်သံနှင့်ဂုဏ်ပြုလွှာလိုက်ငါ့အထိုင်ခုံသို့သွားကြ၏။ ကျွန်မရံဖန်ရံခါမတိုင်မီခံစားခဲ့ရခဲ့သဟာယနှင့်ရဲဘော်အချင်းချင်းသွေးသောက်စိတ်ထား qui တစ်ခုလေထုရှိကွောငျးကိုအဘယ်သူမျှမသံသယရှိပါတယ်။ အားလုံးကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်နှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်း၏လောကဓာတ်နှင့်အတူဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ခဲ့နဲ့ကျွန်မပဲဒီအခမ်းအနား၏ exoticism မှာ gaped ။
နောကျပိုငျးမှာကြက်သရေအနီတောက်တောက်နေဝင်ချိန်တစ်ပောက်သံမီးပိတ်ထားန်းကျင်မှာစုဝေးအပေါင်းတို့၏ရှေ့မှောက်၌, ငါတို့ပျော်ရွှင်စွာတစ် sumptuous မုန့်ညက်စားဒဏ္ဍာရီပုံပြင်များနှင့်ဒဏ္ဍာရီပြောနေရွာ၏ခေါင်းနားထောငျခဲ့။ ထို့ကြောင့်တစ်ဦးအံ့သြစရာညဦးယံအချိန်ရဲ့အဆုံးမှာ, Houri နဲ့ကျွန်မလေးနက်တည်ကြည်စွာအသက်အဘို့အစညျးခဲ့သညျ။
အခန်းကြီး 13: Funerary ယုံကွညျ
ကျွန်မအထူးသဖြင့်-ခဲ့ဇာတိစာတမ်းခဲ့လူမျိုးစုစနစ်ဖြင့်လုပ်ကြံခဲ့။ အမှန်မှာဒီလူ့အဖွဲ့အစည်းမှော်အတတ်အခမ်းအနားများ၏ထူးထူးဆန်းဆန်း ICT ဂုဏ်ယူခဲ့။ ယောက်ျား၏ကနဦး, အိမ်ထောင်နှင့်စိတ်မသာညည်းတွားရိုးရာဓလေ့အခမ်းအနားများမှဦးဆောင်: အဖြစ်မကြာမီကွယ်လွန်သွားခရိုင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်တစ်ဦးအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနား qui လူတွေစဉ်အတွင်းဖှဲ့စညျးခဲ့ထိုအခါအသုဘ၏ကြာချိန်နှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းပျော့ပျောင်းညဉ့်မှတဆင့်ပိုမိုကျယ်လောင်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကျယ်လောင်မြည်တမ်းဖို့စတင် ။ ပျက်စီးအချို့သောမိန်းမတို့သည်သဲပေါ်မှာမိမိတို့ကိုယ်ပစ်နဲ့ခြောကျခြားဖွစျပွီးအော်ဟစ်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏ဒုက္ခဆင်းရဲထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသူအချို့တို့သည်သူတို့၏ lacerated ခန္ဓာကိုယ်နှောင်းပိုင်းတဦးတည်းညည်းတွားခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းလျက်, ရွှေမိမိတို့ကိုယ်ရိုက်။
ထိုခဏခြင်းတွင်မိတ်ဖက်သေသောနောက်, Initiative ၏အုပ်စုတစုဝိညာဉျကိုမှားယွင်းမဒါရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူကွယ်လွန်သူလူတစ်ဦး၏ကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ဖို့ခဲ့။
သူတို့ဟာထိုအခါသူတို့ကထွက်သယ်ဆောင် trepanation la ဝိညာဉ်ကောငျးကငျလယ်ကွင်းပြန်လည်ဖို့ ICT ဇာတိပကတိလူစာအိတ်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်ဒါ Que ခဲ့ဆီနှင့်ရောသောအနီရောင်ရွှံ့၏ကိုယ်ကိုလူး။ Que le လူ့ခန္ဓာကိုယ်ယုံလူလက်ဝိညာဉျကို qui qui နေိုငျခဲ့ပွီးဤတစျခုထက်ကျော်လွန်-ခဲ့ဤလောကတှငျတိုတိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါ icts မစ်ရှင်ဆက်လက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယင်းနောက်သူတို့ဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်၌သင်္ဂြိုဟ် မှော်စာလုံးပေါင်းအတွက်ယုံကြည်ချက်ဒီတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအနွယ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနေမကောင်းကျဆင်းသွားသည့်အခါသူကအဲဒီအစားသူကလုံးဝမှားခဲ့များပြားလှသောဘုရားသခငျ၏တဦးတည်း၏အမျက်သည်ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ပန်းတိုင်အနာရောဂါ attribute မဟုတ်, ဒါကအမြစ်တွယ်ခဲ့။
သူကသားàကျေးဇူးတင်စကားသဘာဝလွန်, သူအစီအစဉျသို့မဟုတ် involuntarily အဆိုပါမညီကြောင်း၏အတော်များများကဥပဒေများများထဲမှချိုးဖောက်နှင့် _him_ မှသက်သာရာရစေရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတစ်ဦးတည်းသာခဲ့သူကားအဘယ်သူကြီးတွေ Shaman များ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဝန်ခံစေခဲ့မယ်ဆိုရင်မှတ်မိဖို့, ဒုက္ခဆင်းရဲကိုအတူကြိုးစားခဲ့ အင်အားကြီး။ အရှင်ကြီးတွေ Shaman သည့်ရိုးရာဓလေ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုဝယ်ကျင်းပများနှင့်ဂရုတစိုက်အသိပညာ၏သော့စောင့်အဖြစ်ရောဂါကိုငြိမ်းစေသောအားဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောအစပျိုးနှင့်အတူ မှလွဲ. '' em ဝေမျှဖို့တွန့်ဆုတ်ခံစားရတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှကျေးဇူးတင်ပါသည်, ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဇာတိစာတမ်း၏ဘိုးဘွားယုံကြည်ချက်ယနေ့အထိမျိုးဆက်မှမျိုးဆက်မှကူးစက်ခံခဲ့ရ။
အခန်းကြီး 14: လူမျိုးစုစနစ်
ကျွန်မအထူးသဖြင့်ဒီအနွယ်အဆင့်ဆင့်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ၏ ICT စနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းခဲ့ပုံကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ လူတိုင်းအဆွေအမျိုးအဘို့အောင်မြင်ရန်ပြီးမြောက်ဖို့တာဝန်ခဲ့များနှင့်သူတို့ကသူတို့လူထုတာဝန်ပြီးဆုံးသောအခါ, သူတို့ကတစ်ဦးဘာသာရေးမျိုးကိုတခြားတာဝန်ဝတ္တရားအပေါ်သယ်ဆောင်ရန်ခဲ့။
, တဦးကိုလက်ပေါ်အခြားတစ်ဖက်တွင်ယောက်ျားအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများ: တစ်ဦးချင်းစီရဲ့အနေအထားကို le အနွယ် dans selon Tasks ကိုဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ ရှည်လျားသော assegais နှင့်အတူလက်နက်လူတို့သညျ, ကြည်လင်သောပင်လယ်၌ငါးဖမ်းကြကြောင်းဌာနကစဉ်အရုဏ်မှာမိန်းမများကြောင့်ရေတံခွန်များအောက်မှာ beater ၏အကြီးအရိုက်ပေးခြင်း, သူတို့ပိတ်ချောကိုဆေးကြော, Sami အဘိဓါန်အားပေးဖို့အချိန်တွင်သီဆိုအခြားတဦးတည်း Reviews ။
နောက်ပိုင်းတွင်ထိုနေ့၏ပြိုင်ပွဲအတွက်ကျနော်တို့အမဲသှားပွီးလြှငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေး Boubou နှင့်တိတု qui အားဖြင့်accompagnéကျွန်တော်တို့ကိုနပန်းဂိမ်းကူညီပေးခဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ကျောတွင်ကျနော်တို့ကျနော်တို့အကြီးအစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခုချင်းစီဖွငျ့ curare နှင့်အတူအဆိပ်သင့်ခဲ့သောဒါကမြှားအပြည့်အဝမယ့်မြှားတောင့်ဆောင်သွားကြ၏။ မသာကိုမှန်ကန် Chameleon နဲ့တူကြင်နာအတွက်ရောနှောနေခြင်းမှပြောက်ကျားများ၏အနုပညာကိုကျွမ်းကျင်ဖို့ကျနော်တို့-ခဲ့, ငါတို့အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြရည်ရွယ်ထားညာဘက်အချိန်လုယူရာဥစ္စာကိုလက်လွတ်မရှိစေရေးအတွက်အကြီးအ Dexter သရုပ်ပြဖို့ခဲ့။ ကျနော်တို့ဂိမ်းနှင့်အတူတပ်ထဲသို့ပြန်လာလိုက်တဲ့အခါမုဆိုးတစ်ခက်တစ်ရက်ပြီးနောက်တစ်ဦးစိုးရိမျစိတျရှညျရှညျနှင့်အတူငါတို့အဘို့အဆိုင်းလင့်လျက်နေ၏အဘယ်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မယားများဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ကျြောလှား, ရှိသမျှကိုငါတို့အပေါ်မှာသူတို့ရဲ့လက်နက်ပစ်ချ၏။ အနည်းငယ်ထပ်မံကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လာဘို့စောင့်ကြည့်အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သြဘယ်သူသားသမီးတို့, သဲ၌ capers ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သူတို့ကအမဲလိုက်ရာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လာမှာပျော်ရွှင်မှုကိုနှင့်အတူခုန်ချနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမည်များကိုထွက်ခေါ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုဆီသို့ပြေးလေ၏။ ထိုအခါအမြိုးသမီးမြားကျယ်ပြန့်အနီရောင်အစစ်သည်အိုးထဲတွင်ချက်ပြုတ်လုပ်ဖို့အကြောင်းကို bustled ။ ဤရွေ့ကားကြွေထည်ဂိမ်း၏ဖွဲ့အစီအမံများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ငါအစားအစာများ၏ပြင်ဆင်မှုအတွက်အသုံးပြုသူကားအဘယ်သူအဲဒီအမျိုးသမီးတွေအတော်များများမွှေးကြိုင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏အချက်အပြုတ်အရည်အသွေးတွေကိုပိုနှစ်သက်တယ်။ ငါသညျဤအမွှေးအကြိုင် gastronomy qui ၏အောက်ဆုံးငါအနောက်ကမ္ဘာစားနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုငါချစ်ငါတို့ရှိသမျှသည် dans le ခရိုင်ခွာခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်တင်းကျပ်ဖို့အမိန့်ထဲမှာ, Sami အဘိဓါန်အိုးစားဒါကတကယ်တော့ခဲ့သောအရာကိုအနေဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောခဲ့ပါတယ်။ ညစာပြီးနောက်, ငါတို့သည် Houri ငါမြစ်၏ရေတံခွန်များအောက်မှာရေချိုးသက်သေခံရှေ့နေ C. ရှည်လျားနာရီ Away ချော်။
ထို့နောက်ကျွန်တော်ဝေးပွောငျလှောငျရည်မှန်းချက်စတေးလျကိုကြည့်ဘယ်သူအနွယ်၏ကျန်ကနေဘဏ်တို့ကထူထပ်သောသစ်ရွက်၏ရငျးနှီးထဲသို့ဝင်ကာအပန်းဖြေစေတနာနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဆကျဆံရေးမှတ်။ တစ်ညပြီးနောက်-တနေရာအိပ်ပျော်ကျနော်တို့နံနက်နှင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရေခြော့ခံစားခဲ့ရသည့်အခါထိုအခါ, ကျနော်တို့အဆုံးမဲ့အပျော်အပါးအတွက်ကွာအရည်ပျော်ဖို့ပိုပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်တစ်ခုချင်းစီကိုအခြားကျင်းပ။ သူမ၏နှင့်တကွ, အတိတ်ဆိုပိုတည်ရှိမဟုတ်, အနာဂတ်ရှိ-အရေးမဟုတ်နှင့်သာပစ္စုပ္ပန်အခိုက်အရေးပါ။ ငါဘာမှမနဂိုအတိုင်းအားစာတမ်းကြိမ်နှင့်ဤသည်ထာဝရမေတ္တာကိုစောင့်ရှောက်-ရှိလိမ့်မယ်။ သို့သျောလူတိုင်းရွာပြန်ရောက်ခဲ့ရပြီးနေရောင်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာပျောက်သွားသောအခါ, တနေ့, ငါစောင့်ကြည့်ကမ်းခြေပေါ်တစ်ဦးတည်း, ထိုရောင် qui ကမ်းနားဆန့်ကျင်ပျက်ကျခြင်းနှင့်ရေမြှုပ်နှင့်အတူက fringed နဲ့ကျွန်မလွမ်းဆွတ်မှု၏တစ်ဦးကရေလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူကျြောလှားခဲ့ ။
အခန်းကြီး 15: သရက်ရွက်
တစ်နှစ်အဝါရောင်-လိမ္မော်အရောင်ကို ယူ. , ငါ nonchalantly ပူသဲပေါ်မှာလဲလျောင်းခဲ့ငါနေဝင်ချိန်၏နောက်ဆုံးရောင်ခြည်ဖြင့် streaked မိုးကုပ်စက်ဝိုင်း qui, စကင်ဖတ်ဖို့ခဲ့။
အံ့သြစရာနှင့်ပြည့်စုံသည်ငါ့မျက်စိများ၏ရှေ့မှောက်၌ငါ Seagull ၏သီချင်းကိုနားထောငျခဲ့
qui, မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်းကဲ့သို့အကြှနျုပျကိုချေါလာငါ့ကိုပြောပြရန်သလိုပဲ, ငါ qui မာကျောက်ဆောင်ပေါ် noisily ဖဲ့လှိုင်းတံပိုး၏မြင့်တက်ကြား၏။ တစ်ဦး suave ဂီတထုတ်လုပ်အဲဒီအသံ၏ရောနှော, qui ငါ blissfully ပြုံးပြနှေးကွေးစွာငါ၏အမျက်ခမ်းပိတ်, ငါ့ကိုထူးဆန်းပါ။ အခုတော့လွမ်းဆွတ်မှုနှင့်ပြည့်စုံ, ငါသညျငါ့အမြစ်များမှငါ့ကိုချိတ်ဆက် qui, ထိုသင်္ကေတကျြကွိုးများ၏ပျံနံ့သတိထား est devenu ငါသတငျးမြားကိုမပါဘဲကျန်ရစ်ခဲ့ပြီးသောမိသားစုထင်နှင့်။
ငါအခုထိကျွန်မရဲ့မိဘတွေဆီကနေအဖြူရောင်ဖြစ်ခြင်း em '' ငါချစ်ဘယ်လောက်ငါ့ကိုသတိပြုမိလုပ်သော '' သဘောပေါက်လာတယ်။ အခုဆိုရင်ကျွန်မအသက်တာ၌နှင့်မည်သို့သိသာထင်ရှားသောသူတို့သည်ငါ၏အသက်တာ၌ဖြစ်ကြ '' em လွဲချော်ဘယ်လိုခံစားရနိုင်ပါ။ ကျွန်မဘဝကမတ်ေတာ၏ဆားနဲ့စကားများအပူမပါဘဲကတန်ဖိုးရှိမဟုတျကွောငျးခံစားရတယ်။ ငါမပြောတတ်တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့်အတူ chat နှင့်ငါ့နှလုံး em ဖွင့်ဖို့လိုအပ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာငါတစျလောကလုံးအတွက်တစ်ဦးတည်းဖြစ်ဖို့ခံစားချက်ခဲ့။ ရုတ်တရက်သူတစ်ဦးဦးကိုငါ့ပခုံးပေါ်တစ်ဦးလက်ကိုသွင်း, ငါ့ဝမ်းနည်းခြင်းမှအဖြေပေးရလျှင်အဖြစ်: ဒါဟာငါ့အမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်တဲ့သူ, Houri ခဲ့ငါ့ကိုရှာလာရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ငါ့ကိုလက်ရုံးအားဖြင့်ခိုင်မြဲစွာ welded မြိ်ု့ကျနော်တို့စခန်းချပြန်သွားကြ၏။
လမျးခရီးတွင်သူမသည်ငါ့ကိုနားလည်ငါသည်ငါ့တိုင်းပြည်ဇာတိကိုပြန်သွားဖို့ရှေးခယျြခဲ့လျှင်သူသည်ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားပါ့ဒါကပြောတယ်။ သူမသည်ငါ၏အကြံအစည်ကိုဖတ်ရှုကြရမည်ဖြစ်သည်။ သူမသည်ကျနော်ဆိုလိုသည်မှာခြင်းဖြင့်စာနာသူမ၏နှလုံးကျိုးခဲ့ခံစားခဲ့ရဣနြေ္ဒနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ရည်ရွယ်ချက်ထင်ရှား။ , သူမသည်ဒါဟာသူမတတ်နိုင်သမျှတစ်ခွဲခြာများအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ခဲ့, တနေ့ဖြစ်ပျက်ပါ့ဒါကသိမှတ်ကြလော့တစ်ဦးမျက်ရည်ဘတ်စ်ကားကိုသွန်းမဟုတ်။ သူမသည်သူသည်ငါ့ထွက်ခွာရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်ဒါဟာသူမ၏သိပ်မထိခိုက်မလားဒါကပြောတယ်။ ကျနော်တို့ရွာအနီးရောက်သောအခါထို့နောက်သူမသည်, ငါ့လက်ကိုဖြန့်ချိသည့်ခြေလှမ်းအရှိန်နှင့်သူမ၏အရိပ်ဟာမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာပျောက်ကွယ်တိမ်မြုပ်နေတဲ့ကျဉ်းမြောင်းတဲ့လမ်းကြောင်း၏ meanders အတွက်သူ့ကိုယ်သူလွှမ်းလေ၏။
အခန်းကြီး 16: အစက်ကုစားခြင်း
ငါဝေးအားလုံးနည်းပညာများ, ငွေကြေးစနစ်များနှင့်သိပ္ပံ, ငါသစ်ပင်များကိုနားထောင်ဖို့ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့ဘယ်မှာ, ထိုပန်းပွင့်နှင့်ကိုငှက်ကနေပြီးသားသုံးနှစ်အ ... ငါသည်ဤမြေပေါ်တွင်တဦးတည်းတစ်ထောင်ကိုးဆယ်ငါးရက်သုံးစွဲခဲ့, ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့ယဉ်ကျေးမှုကျန်ရစ်ခဲ့ , သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအားဟောပြောသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကျနော်တို့သူတို့ဘာသာစကားကိုနားထောင်ရတဲ့အခါသူတို့ကပရဒိသုသေသောနောက်, တစ်ဦးအသက်တာ၏ prerogative ပေမယ့်သဘောသဘာဝများ၏အများစုမှာမူလတန်းအရာရာ၌အတော်လေးပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါဘူးဒါက, ကျွန်တော်တို့ကိုဆကျသှယျဖို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်မမေတ္တာသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှုရှာနေဤမျှလောက်အချိန်ကြာအောင်ခဲ့ ... ဒါပေမယ့်ငါအဲဒါကိုဒါဟာရှိခြင်းသည်သာနည်းလမ်း Cluster တီးတိုးမရှိဘဲအခြားသူများအားအပ်ရန်ဖြစ်ပါသည်ရိုးရှင်းစွာသောကြောင့်, ဆယ်ခြောက်ပျော်ရွှင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်နိုင်မဟုတျကွောငျးဒီခရီးစဉ်အတွင်းမှာတော့သင်ယူခဲ့, မဆိုင်းမတွ မဟုတ်သလိုနောင်တရ။
နောက်တစ်နေ့မနက်မှာပြီးနောက်-The ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏ရှည်လျားသောညငါကျွန်းမှထွက်ခွာရန်ငါ၏အလိုဆန္ဒနှင့် ပတ်သက်. အနွယ်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ငါသည်ငါ့ဇနီး, Houri စွန့်ခွာချင်ခဲ့ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါအချက်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သူကားအဘယ်သူကြီးတွေ Shaman ထံမှသာယာသောမိန့်ခွန်းကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်သို့သော်သူသည်ငါ့ကိုကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းကိုတစ်အရိပ်အမြွက်နှင့်အတူသူ့အစွမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ တစ်ဦးအထိမ်းအမှတ်ပါတီနက်ဖြန်နေ့၌အဟောင်း wizard ကိုလူတချို့ကသေးငယ်တဲ့ယာဉ်စေရန်သစ်ပင်များကိုဆင်းခုတ်ဖို့ခံစားရ, အရုဏ်မှာ, ထိုအခါငါ၏အဂုဏ်အသရေရှိခဲ့။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာမှာတော့တပြင်လုံးကိုခရိုင်ကမ်းပေါ်မှာစုဝေးခဲ့။ ငါ့ကိုဆီသို့သူတို့ရဲ့ခင်မင်မှုသရုပ်ပြဖို့တချို့ကငါ့ကို offert ဇာတိပုံဆောင်လက်ဆောင်တစ်ခု။
ဤသို့သောထူးခြားပြောင်မြောက်။ အသံတိတ်ဇာတ်ကောင် Shaman ကြီးသည်ထိုစကားလုံးအနည်းငယ်ကိုပြောသောအခါအံ့အားသင့်မိသည်။ သင်ဤအရာကိုနားလည်သောအခါ၊ မသိရသောအရာများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့် ပြော၍ မရသောအရာကိုသင်၏ရေငတ်မှုသည်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ »ထို့နောက်သူကသူ့ဂျပိန်လက်ကိုကိုင်ပြီးကျွန်တော့်ခရီးတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော့်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ဒီဝတ်စုံတစ်ချောင်းကိုပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်ခေါင်းကိုခေါင်းတညိတ်ညိတ်ဖြင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အတွက်အခက်ခဲဆုံးအချိန်ကတော့ဟူရီဟာလှေအနီးကိုရောက်တဲ့အချိန်ပဲ။ သူမနီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှသူမရဲ့မျက်လုံးများကသူမအားစိတ်သောကအားလုံးကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမသည်ငါ့ကိုနှုတ်ခမ်းပေါ်ပေါ့ပေါ့နမ်း, ပြီးတော့ထွက်သွားလေ၏။
ထိုအခါအကြီးတိတ်ဆိတ်, လေထုနှင့်ပြည့်၏။ ထို့နောက်တိတ်ဆိတ်စောင့်ရှောက်ခြင်း, ငါစကားလုံးဟုခြင်းမရှိဘဲ, သေးငယ်တဲ့ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာအံ့ဩဘွယ်သောအရှုခင်းကိုချိုးဖောက်ခြင်းမရှိဘဲ, အာရုံစူးစိုက်ယင်းအစားလုံးဝ Call ပျော်ရွှင်, တစ်ခုလုံးအဖြစ်ကမှာရှိဒီမှာငှက်သို့မဟုတ်အပင်တစ်ပင်ရည်မှန်းချက်ကိုရှာဖွေနေသည်နောက်ဆုံးသောကာလအဘို့ဤပရဒိသုကျွန်းမှာငေးကြည့် ပြည့်စုံခြင်းအတွက် icts ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြီးနောက်ဤပြင်းထန်သောလေ့လာရေး၏အခိုက်, ရှိသမျှတို့ကိုငါ Totem နှင့်မညီကြောင်း၏ဤ Wonderland အပေါ်မှာငါ့နောက်ကျောလှည့်, ခါးသီးမှုတွေနဲ့ရောနှောဝမ်းမြောက်ခြင်းတစ်ဦးခံစားချက်အားဖြင့်ကျွေးမွေးပြုစုခြင်း, ယာဉ်ပေါ်ထားခဲ့တယ်။
ဤသည်စွန့်စားမှုအကြှနျုပျ၏ဝိညာဉျကို, ကိုယ်ခန္ဓာ၏အောင်စအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ကြောင့်ဝိညာဏ်၏အဆင့်မြင့်အဆင့်ရောက်ရှိဖို့ခွင့်ပြုပါရန်အလွ initiatory ခရီး beens ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ငါပစ္စုပ္ပန်နေ့ကသီးသန့်နေထိုင်နေ, ငါ့ဒုက္ခဆင်းရဲကို, ငါ့သံသယ, ငါ၏မနေ့က၏စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်မနက်ဖြန်ဖယ်ရှားပစ်တယ်။ အကြှနျုပျ၏ဖြစ်တည်မှု est လှိုင်းတံပိုးမရှိဘဲသမုဒ္ဒရာအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ဦးကြည်လင်ဆင်တူ devenu မဟုတ်သလိုတကိုယ်လုံးရောင်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ကြီးစွာသောအမှန်တရားရှာဖွေတွေ့ရှိနှင့်ငါ့မစ်ရှင်နားလည်သဘောပေါက်မှတက်ငါ-ခဲ့တာခဲ့ယောက်ျားများ၏စုပေါင်းသတိလစ်အပေါ်ကောက်ရိုးတစ် wisp ကဲ့သို့လေဖြင့်လွင့်။ နေရောင်ကိုမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းမှာပျောက်ကွယ်သွားစဉ်ထို့နောက်ငါပြီးပြည့်စုံကမ္ဘာ၏ထင်ယောင်ထင်မှားကွာသေဆုံး Sami အဘိဓါန်အချိန်တွင်စောင့်ကြည့်, လှေများ၏နိုးထသာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတာရှည်ထွန်နောက်ကွယ်မှထွက်ခွာ, တစ်ဦးထက်ပိုသောသံသယရှိမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဆီသို့ရွှေ့ခဲ့၏ ...
သူမ၏ Afrikan အခြေအနေတွင် Het Heru
မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ကိုလွတ်စေ - Idriss Aberkane (အသံ)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရောဂါများအတွက်တာဝန်ရှိ devices များလျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်း?